NaN Ei Hair Salon & Skin Care
##Discount Coupon#15% up to 20%#Nan Ei Hair & Skin Care
✔️ ✔️ ✔️ဘော်ဒါတို့ရေ…….သင်္ကြန်လေးကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့…..အမိုက်စားမဏ္ဍပ်တွေမှာ အမိုက်စားဒီဇိုင်းတွေနဲ့အပီလန်းနိုင်ဖို့အတွက် အမိုက်စား Hair Design မျိုးစုံကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးပေးနေတဲ့ မြို့ထဲ 47လမ်းထဲက 😎 😎 Hair Salon ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ထားတယ်။
✔️ ✔️သူက မြို့ထဲ ၄၇လမ်းထဲက 🏡 🏡 Nan Ei Hair & Skin Care ဆိုင်လေးပါ။နောက်ပြီးဒီဆိုင်လေးမှာက သင်္ကြန်ချိန်ခါလေးကလည်း နီးလာပြီဆိုတော့ အမိုက်စား 😍 😍Promotion ကို 15% ကနေ 20% ထိပေးထားးတာဆိုတော့ ကိုယ်တွေလိုဘဲ Discount ဆိုသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုနော်…။ဆိုင်ရဲ့အထူးခြားဆုံးနဲ့အမိုက်ဆုံးအချက်က သင်္ကြန်နဲ့လည်းလုံးဝကိုလိုပ်ဖက်မဲ့ နေရာတိုင်းမှာလဲမရနိုင်တဲ့ 😉 😉 Dreadlock Design တွေဆိုမိုက်မှမိုက်…ဈေးနှုန်းကလည်း 💰 💰၈၀၀၀၀ ကနေစပြီး သိန်းကျော်တဲ့ထိ အစားစားရှိတယ်ဗျ…နောက်ထပ်Nan Ei Hair Salon & Skin Care မှာရနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
✔️ ✔️ ✔️Hair နဲ့ပတ်သက်ပြီး ညှပ် ၊ဖြောင့် ၊ကောက် ၊ဆေးဆိုး တာတွေ Treatment မျိုးစုံတွေကို အနည်းဆုံး 💰၃၀၀၀ ကနေစပြီး ဈေးနှုန်းအစားအစားရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ➡️ 💆‍♀️ 💆‍♂️ Facial ပိုင်း အသားအရည်တွေပျက်စီးနေတာတွေ ၊ဝက်ခြံတွေ ၊နေလောင်တာတွေကြောင့် အပြင်ထွက်ရမှာ ပွဲတက်ရမှာတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေရလို့စိတ်ညစ်နေရပါသလားးဒါဆိုရင်တော့ 👉Nan Ei Salon ကိုသာသွားလိုက်တော့နော် ဒီဆိုင်မှာ Facial ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Treatment မျိုးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်နော် Facial ပေါင်းတင်တာတွေကိုလည်း Japan Brand ကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုပေးထားတာပါ။ ဈေးနှုန်းတွေလည်းမဆိုးဘုး 💰၁၆၀၀၀ ကျပ်ကနေစပြီး အစားစားရှိတယ်နော်။နောက်တစ်ခုက Body ပိုင်း ➡️Body ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ဂျေးချွတ်တာတို့ ပေါင်းတင်တာတို့ကိုလည်း 💰 8000 ကနေ စပြီးအစားစားရှိပါတယ်။Body ပေါင်းတာတွေကိုလည်း ယိုးဒယား Brand တွေကို အဓိကသုံးပေးထားတာနော်။
✔️ ✔️ ✔️ကဲ…Nan Ei Salon ရဲ့ရနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ယူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Discount အစီစဉ်လေးကိုပြောပြမယ်…Nan Ei Hai Salon ကို 🌐Groupbuyy ကနေ Discount Coupon လေးထုတ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့…..
➡️Facial -15% Discount
➡️Hair Treatment -20% Discount
✔️ ✔️ ✔️Wow…..လုံးဝအလန်းစား Promotion ကြီးနော် Promotion ကာလက အကန့်အသတ်လေးရှိနေတာဆိုတော့ လက်လွတ်မခံဘဲ Groupbuyy ကနေ Discount Coupon လေးထုတ်ပြီး အမြန်ဆုံးသာ ဒိုးလိုက်တော့ ….
✔️ ✔️ ✔️Discount Coupon Code ရရန် 📱 📱Groupbuyy Hotline 09450067677,09450087677 သို့ 👉 👉 ( Nan Ei Hair Salon 15 % or 20% Off Discount Coupon ) ဟု SMS ပေးပို့ပြီး Coupon Code ထုတ်ယူသွားဖို့လဲမမေ့ကြနဲ့အုံးနော်….။
✔️ ✔️ ✔️(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။
🙅‍♀️ 🙅‍♀️သတိပြုရန် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️
➡️ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 9:00AM to 8:00PM
➡️ဆိုင်ပိတ်ရက်- Monday တိုင်းဆိုင်ပိတ်ပါသည်။
➡️လိပ်စာ - အမှတ်(၁၅၆),(၄၇)လမ်း(အပေါ်ဘလောက်), ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
Shine On You Beauty SPA
#Groupbuyy Discount Coupon #Thingyan Special Promotion#March 21 to April 10# Shine On You Beauty SPA
👌 👌ဘော်ဒါတွေအတွက် သင်္ကြန်တွင်းမှာ Hair Style လန်းလန်းလေးနဲ့အပြတ်ကဲနိုင်ဖို့ အတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်..။ 👌 👌
🎉 🎉Shine On You Beauty SPA မှာသင်္ကြန်အတွက် သီးသန့် Special Promotionတွေရှိနေတာဖြစ်လို့ သင်္ကြန်မှာအများနဲ့မတူဘဲ လုံးဝအလန်းဖြစ်နေဖို့ဆိုရင်တော့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုနော်…။
🎉 🎉Promotion ကာလက ❣️March 21 မှ April 10 ❣️ထိဆိုတော့ နောက်ကောက်ကျမကျန်ခဲ့ရအောင် အခုဘဲ 📱 📱 Groupbuyy Hotline 09450067677 ,09450087677 သို့ Bookingလုပ်ပြီး အမြန်ဆုံးသာသွားလိုက်ကြဖို့ အကြံပေးလိုက်တယ်နော်…။
🎉 🎉သင်္ကြန်တွင်းဆိုတော့ Crazy Colour လေးဆိုးပြီး လန်းချင်ပေမဲ့ ချွတ်ဆေးတွေကြောင့် ဆံသားပျက်စီးမှာကိုကြောက်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်လည်း ✂️ ✂️Shine On You မှာ Professional Hair Stylist များမှ ဆံသားပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ အမိုက်စား Hair Design လေးနဲ့သင်္ကြန်ကို အပြတ်ကဲနိုင်ဖို့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာနော်..။နောက်ပြီး သင်္ကြန် 👌 👌Fashion တစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့ Crazy Colour လေးဆိုးပြီး ကျစ်ဆံမြီးအမိုက်စားလေးတွေကျစ်မယ်ရင်တော့ လုံးဝအလွင့်ဘဲလေ ဒီလိုအမိုက်စား Hair Design မျိုးစုံကို Shine On You beauty SPA မှာဘော်ဒါတို့စိတ်တိုင်းကျ အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်း တွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အပြင် အခုဆိုရင် သင်္ကြန်အတွက် အများနဲ့မတူတဲ့ အမိုက်စား 👌Promotion တွေပါရနေပြီဆိုတော့ သင်္ကြန်မှာ လန်းမဲ့ဘော်ဒါတွေ အမြန်ဆုံးသာဒိုးလိုက်တော့….။
🎉 🎉Shine On You Beauty SPA မှာသင်္ကြန်အတွက်ဘယ်လို Service တွေကို Promotion ပေးထားသလဲဆိုတော့….
စသဖြင့်မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၃မျိုး ကို ၁သိန်းကျပ်တည်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာပါနော် 👀 👀
👌 👌 အတန်ဆုံး Promotion တွေပေးထားတဲ့အတွက်လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။
🎉 🎉Shine On You Beauty SPA ကိုသွားမည့်ဘော်ဒါလေးတွေအတွက် Shine On You Beauty SPA ရဲ့ လိပ်စာက…
🏡 🏡အမှတ် ၉၇၂ ၊ ရတနာလမ်းမ ၊ ၁၄/၁၅ လမ်းဆုံ ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
📱 📱Reservation ကြိုလုပ်ချင်သူတွေအတွက် Groupbuyy Hotline -09450067677 ,09450087677 သို့ တိုက်ရိုက် ဖုန်းဆက်ပြီး Reservation လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်…
##တောင်ဥက္ကလာ ရတနာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Shine On You Beauty SPA
##Groupbuyy Discount Coupon
##Up to 40% Discount of Shine On You Beauty SPA
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy ရဲ့ဇိမ်တစ်လိုင်း ဘော်ဒါတို့ရေ….ရုံးပိတ်ရက်လေးတွေမှာ ခရီးမထွက်ဖြစ်ဘဲ ရန်ကုန်မှာဘဲရှိနေမည့် သူတွေအတွက် အထူးသတင်းကောင်းးရှိတယ်နော် ……. 💆‍♀️ 💆‍♀️ရုံးပိတ်ရက်လေးတွေမှာ အသားအရေလေးလဲထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ် အညောင်းအညာလဲဖြေရင်းနဲ့ အေးဆေး Relax လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် 👉 တောင်ဥက္ကလာရတနာလမ်းမပေါ်က 🏠 🏠Shine On You Beauty SPA ရဲ့အမိုက်စား Promotion ကြီးနဲ့အတူတူ သင်တို့ရဲ့ ရုံးပိတ်ရက်လေးတွေကို အကျိုးရှိစွာ ကုန်ဆုံးလိုက်ပါ……
##40% Discount Coupon ထုတ်ယူနည်းလေးကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်##
✔️ ✔️ ✔️လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ပိတ်ရက်လေးတွေကိုအကျိုးရှိစေဖို့အတွက် 🌐 🌐 Groupbuyy ကအမိုက်စား Promotion ကြီးကိုသယ်ဆောင်လာပါပြီ….Groupbuyy ရဲ့ Discount Coupon လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် 🏠Shine On You Beauty SPA ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများစွာထဲက 😍 😍Facial ပိုင်း (မျက်နှာအဆိပ်ထုပ်ပေါင်း )နဲ့ 😍 😍Body ပိုင်း (Herbel Massage) နှစ်မျိုးကို 40 % Discount ချပေးနေပြီနော်….အရမ်းကိုတန်တဲ့ Promotion ကြီးဖြစ်လို့နောက်ကောက်ကျမကျန်စေဖို့ အမြန်ဆုံးသာသွားလိုက်တော့….Discount ပေးထားတဲ့ Service နှစ်မျိုးကို အသေးစိတ်လေးပြောပြချင်တယ်
💝 💝Facial-မျက်နှာအဆိပ်ထုပ်ပေါင်း (30000Ks ) 💝 💝
✔️ ✔️ ✔️မျက်နှာအဆိပ်ထုတ်ပေါင်းမှာ အဆင့် ၉ ဆင့်ပါပါတယ်။
-Make up Remover ၊ -Deep Cleasing ၊-ကြေးချွတ်ပေးခြင်း ၊-Cream လေးလိမ်းပေးပြီး မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါတယ် ၊ -အဆိပ်ထုတ်ပေးပါတယ် ၊-ဝက်ခြံ ၊ဆားဝက်ခြံရှိသူတွေဆို ဒီအဆင့်မှာ ညှစ်ပေးပါတယ် ၊ -ပေါင်းတင်ခြင်း ဒီအဆင့်မှာတော့ ပေါင်းတင်တဲ့အခါ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ brand ကိုရွေးချယ်ပြီး ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။ 👉(Facial နဲ့ပတ်သက်ပြီး Shine On You မှာက YONKA , Dermalogica Brand ကို လူကြိုက်များပြီးအသုံးများပါတယ်။၊နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ Cream ပြန်လိမ်းပေးပါတယ် ၊နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ဗီတာမင် E ကိုလ်ိမ်းပေးပါတယ်။အဆင့်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သင့်မျက်နှာလေးက သိသိသာသာကို ကြည်လင်ဝင်းပလာတယ်ဆိုတာကိုခံစားရမှာနော်…။သူကတော့ ဈေးနှုန်း ၃၀၀၀၀ကျပ်ပါ ။Groupbuyy ကနေသွားမည့် Customer တွေကိုတော့ ၄၀ % Discount ရမှာနော်..။
💝 💝Body-Herbel Massage(30000Ks ) 💝 💝
✔️ ✔️ ✔️Body Massage နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက အဆင့် ၅ဆင့်ရှိပါတယ်။
-ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Scrub လုပ်ပါတယ် ၊-ဒုတိယအဆင့်မှာ Massage Cream လိမ်းပေးပြီး နှိပ်ပေးမှာပါ ၊-တတိယအဆင့်မှာတော့ ပေါင်းတင်ပေးတာပါ ဒီအဆင့်မှာ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တာကို ရွေးချယ်ပြီး ပေါင်းတင်နိုင်အပါတယ်။ 👉(နနွင်း ၊ဒိန်ချဉ် ၊ ပျားရည် )စသဖြင့်ရွေးချယ်န်ိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ ရေချိုးပေးတာပါ ၊နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ Loction လိမ်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆင့်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပိတ်နေတဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေ ပွင့်ပြီး အညောင်းအညာပြေကာ လုံးဝ Relax ဖြစ်နေမှာနော်…။ဒီ service က ၃၀၀၀၀ကျပ်ပါ။ Groupbuyy Discount Coupon နဲ့ဆိုရင်တော့ ၄၀% Discount ရမှာဆိုတော့ တော်တော်လေးတန်သွားပြီနော်။ 👉 👉ဆေးမြစ်စုံနဲ့ Sauna ထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ 💰 💰 ၁၀၀၀၀ကျပ်ထပ်ပေးရုံပါဘဲနော်။နောက်ပြီး ဘယ်မှာမှမရနိုင်တဲ့ 👉 👉Gel ဆေးစိမ်တာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် သူက 💰 💰၅၀၀၀ ကျပ်ဘဲရှိတယ်။
✔️ ✔️ ✔️Shine On You Beauty SPA ကတောင်ဥက္ကလာ ရတနာလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီး အောက်ဆုံးထပ်မှာက 👉 👉 Shine On You Morden Furniture Show Room ကြီးကိုအရင်တွေ့မှာပါ အထဲကိုဝင်ပြီး ထပ်လှေခါးလေးနဲ့တက်သွားတဲ့အခါ ၅လွှာရောက်တဲ့အခါ မှာတော့ Shine On You Beauty SPA ကိုရောက်ပြီနော်..။ဒီဆိုင်မှာက 😎 😎 ခေါင်းအစခြေအဆုံး Service မျိုးစုံကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါရနိုင်ပါတယ်။ 💝Facial ကိုအဓိက YONKA and Dermalogica Brand ကိုအသုံးပြုပေးတယ် ဈေးနှုန်းကလည်း 💰 💰15000ကနေ 70000ထိအစားစားရပါတယ်။ 💝Body Massage ကိုလည်း OPI Brand ကိုအဓိကသုံးပေြး့ပီး ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း 💰 💰 15000ကျပ်ကနေအစားစားရှိပါတယ် ။
✔️ ✔️ ✔️ကဲဒါဆို You တို့ရဲ့ Super Holidays ကို 🌐 🌐 Groupbuyy ကနေ Discount Coupon လေးထုတ်ပြီး Shine On You Beauty SPA မှာ သာသာယာယာလေး Relax လုပ်ကြဖို့အကြံပေးလိုက်တယ်နော်…။
✔️ ✔️ ✔️Discount Coupon ရရန် Groupbuyy Hotline 09 450067677 ,09450087677 သို့ 👉 👉
( Shine On You Beauty SPA 40 % Discount ) ဟု SMS ပေးပို့လိုက်ပါ။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိမိ Mobile ဖုန်းထဲသို့  SMS Coupon Code ပြန်လည်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
⏩-ဆိုင်ဖွင့်ချိန် -9:00AM to 9:00PM
⏩40% Discount သည် တစ်ဆိုင်လုံး Service မဟုတ်ပါ။Facial (မျက်နှာအဆိပ်ထုတ်ပေါင်း )နှင့် Body (harbel Massage ) နှစ်မျိုးအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
🏠 🏠 လိပ်စာ 🏠 🏠
No.972, Yadanar Road, Near Junction of 14th/15th Street, 5th Floor, Shine Tower, South Oakkala Township, Yangon, Myanmar
Building (6/2), ZezawarHousing(2), Thanthumar Road, South Okkalapa Township Feeling Amazing SPA
##Groupbuyy Discount Coupon #20% Off Coupon #Feeling Amazing SPA
✔️ ✔️ ✔️Groupbuyy Coupon Coustomer တို့ရေ…Happy Monday ပါနော်…ပျိုပျိုမေတို့ရဲ့ နောက်ထပ်လာမည့် ပျော်ရွှင်စရာ 💃 💃Weekend လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိရှိဖြတ်သန်းးကြမယ်စိတ်ကူးထားပါသလဲ ….. ? 📆 🗓️တစ်ပတ်စာလုံး အလုပ်မှာ စိတ်ပင်ပမ်းလူပင်ပမ်းနဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်သွားလာနေရတော့ 🤔အသားအရည်တွေလဲပျက်စီးနေမယ် 🤔 ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုတွေလည်းဖြစ်နေမယ် 👯‍♀️ 💃 💆‍♀️ မိန်းကလေးတို့သဘာဝအရအသားအရေလေးလှနေဖို့ကလဲလိုသေးတာပေါ့လေ ဒီလိုဆိုအေးအေးဆေးဆေး Relax လုပ်ဖို့နေရာလေးတစ်ခုတော့လိုနေပြီနော်… admin ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကသွားခဲ့တဲ့ 💕SPA လေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ဒီweekendလေးမှာထပ်သွားအုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်…. ပျိုမေတို့လဲ 🌐 🌐Groupbuyy ကနေ 💰 💰 20% Discount လေးနဲ့အတူတူ Admin နဲ့အတူ တောင်ဥက္ကလာ သံသုမာလမ်း ဇီဇဝါအိမ်ရာ -၂ မှာရှိတဲ့ 💕 💕Feeling Amazing SPA လေးကိုအတူလိုက်ခဲ့ကြဖို့ Recommend ပေးလိုက်တယ်နော်….
✔️ ✔️ ✔️ဒီSPA လေးက ဇီဇဝါအိမ်ရာ -၂ ထဲမှာ လုံးချင်းသုံးထပ်တိုက်မှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ Relax ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကိုသင့်တော်တဲ့နေရာ 👉ဆိုင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာဆို Dry Massage Oil Massage အတွက်သီးသန့်ခန်းလေးရှိတယ် 👉 👉 ဒုတိယထပ်မှာဆို Nail ,Foot Treatment နဲ့ Facial treatment အတွက် သီးသန့်အခန်းလေးတွေရှိတယ် အခန်းလေးတွေက သပ်ရပ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့အတွက် တကယ်ကို Relax လုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာအနေအထားလေးပါ 🔕 🔇 (ဘာဆူညံသံမှကိုမကြားရဘဲ ဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီး SPA ရဲ့ အနံ့သင်းသင်းလေးရယ် SPA နဲ့လိုက်ဖက်လွန်းလှတဲ့ ဂီတသံတိုးတိုးလေးက ကိုယ်တွေဆို ဝင်တာနဲ့ 😝 😜အိပ်ပျော်ချင်နေပြီ..)နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးက 🧕 🧕ဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ ဖော်ရွေပြီး စိတ်ရှည်မှုနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုက အမှတ်ပြည့်ဘဲဗျို့ 🤔 🤔(SPA တွေရဲ့ အဓိကကျဆုံးအချက်က ကိုယ်တွေအမြင်ဆို Service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့စိတ်ရှည် ကျွမ်းကျင်မှုကတော်တော်အရေးကြီးတယ်လေ ဒီSPA မှာဆို ကိုယ်တွေဘဲမဟုတ်ဘဲ လာတဲ့Coustomer တိုင်းရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အဝဆွဲဆောင်ထားတာနော်)
✔️ ✔️ ✔️ဒီSPA လေးမှာ ခေါင်းအစခြေအဆုံး Service တော်တော်များများရတယ်။ဈေးနှုန်းတွေလဲမဆိုးဘူးသင့်တင့်တယ် 💫 💫 Hand & Foot Treatments အတွက်ဆို အနိမ့်ဆုံး 3000 ကနေ 18000 အတွင်းရှိပါတယ် 💫 💫 Hair Treatments အတွက်ဆို 3000 ကနေ 20000 အတွင်းရှိတယ်နော် 💫 💫Waxing ဆို 5000 ကနေ 20000 ပါ ။ 💫 💫Facial Treatments အတွက်ဆို 8000 ကနေ 60000 အတွင်းအစားစားရှိပါတယ်။ 💫 💫Body Treatments ကိုတော့ 18000 ကနေ 40000 အထိရှိတယ်နော် တစ်နေရာထဲမှာဘဲ စုံစုံလင်လင် ရနေတာဆိုတော့ တော်တော်လေးမိုက်တယ် နောက်ပြီးတော့ 👉 👉မျက်တောင်ဆက်တာတွေပါတွေလဲ ရသေးပါတယ်။Feeling Amazing SPA မှာရနိုင်တဲ့ service တွေအားလုံးနီးပါးကို ကိုယ်တွေကတော့ အရမ်းကိုကြိုက်နေတာဘဲ အားလုံးထဲမှာမှ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လာတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးဖောက်သည်ချချင်ပါတယ်။Admin တို့အဖွဲ့သွားခဲ့တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တာလေးတွေကတော့ 👉 👉Oil Massage , Facial Treatment ,Foot Cleasing တော်တော်ကို မိုက်တာ လုပ်ပေးတဲ့ညီမလေးတွေကလည်း စိတ်လဲရှည်ပြီး သေချာလေးလဲရှင်းပြရှာတယ်။
✔️ ✔️ ✔️Oil Massage –Body Massage
OPI ,Lycon Brand တွေကိုအဓိကသုံးပေးထားတယ် Organic ကြိုက်တဲ့ မမတွေအတွက်လဲ(ဆနွင်း or rice and coconut or မန်ကျည်း or cream)စတဲ့ Organic ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လည်းပြုလုပ်ပေးသေးတယ်။Feeling Amazing မှာ ရနိုင်တဲ့ Body Spa အဆင့်လေးတွေပြောပြချင်ပါတယ်
ပထမဆုံး Scrub တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိအသားအရည်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေး dead cell တွေကိုဖယ်ရှားစေပါတယ် ပြီးရင် ဆေးမြစ်စုံ Sauna ထိုင် ချွေးထွက်စေခြင်းဖြင့် ပိတ်နေတဲ့ ချွေးပေါက်လေးတွေပွင့်စေပါတယ် နောက်တဆင့်အနေနဲ့ back and shoulder ကို အမွှေးဆီ လေးဖြင့်နှိပ်ပေးတာကြောင့် အညောင်းအညာတွေတော်တော်လေးပြေတယ်။
နောက်ပြီးမှ body Mask တင်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိအသားအရည်လေးကတင်းပြီးချောမွေ့သွားစေဖို့ မိနစ်၂၀ လောက်ထားပြီးရင်တော့ ရေချိုး lotion ပေးပါတယ်။အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ မိမိရဲ့အသားအရည်က တော်တော်လေးကြည်လင်လာတာကို သိသာစေတယ် နောက်ပြီး တော်တော်လေးလဲ Relax ဖြစ်တယ်။ကိုယ်တွေဆိုအိပ်ပါပျော်သွားတယ် အားလုံးအပြီးအစီး ၂နာရီလောက်တော့အချိန်ကြာပါတယ်။နောက်ထပ်အမိုက်စားအစီစဉ်လေးပြောပြပေးချင်သေးတယ် Feeling Amazing ရဲ့ body scrub ကို ၅ကြိမ်လုပ်ရင် တစ်ကြိမ် Free ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဖြစ်ဖြစ် ၃ယောက်ဖြစ်ဖြစ် Sharing လုပ်ပြီး လုပ်လို့လဲရတော့ တော်တော် Good တယ်။
✔️ ✔️ ✔️Facial Treatment
Facial Treatment ဆိုလဲတော်တော်ကိုသိသာတယ် အဆင့်လေးဆင့်နဲ့လုပ်ပေးတာ Us Brand ,ပြင်သစ် Brand ,ထိုင်ဝမ် Brand မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ brand နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်။Facial Treatment လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာက တော်တော်လေးကိုကြည်လင်သွားတယ် ဝက်ခြံရှိတဲ့လူတွေဆို ဝက်ခြံတွေပါညှစ်ပေးတာဆိုတော့ အညစ်အကြေးတွေတော်တော်သန့်သွားပြီး တော်ရုံပြန်မထွက်တော့ဘူး ကိုယ်တွေတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်။
✔️ ✔️ ✔️ကဲဒီလောက်ဆို ပျိုမေတို့လဲ Feeling Amazing SPA ကို စိတ်ကူးနဲ့ရောက်နေလောက်ရောပေါ့ ..အမှန်အကန် Relax ဖြစ်စေတဲ့ နေရာလေးဖြစ်လို့ စိတ်ကူးနဲ့မဟုတ်ဘဲလက်တွေ့သွားရောက်ကြဖို့ Recommend ပေးလိုက်တယ်နော်။ aww ဒါနဲ့ 🌐 🌐Gropupbuyy ကနေ 💰 💰 20% Discount Coupon လေးထုတ်သွားဖို့လဲမမေ့နဲ့အုံးနော် ။Discount Coupon ရရန် Groupbuyy phone 📱 📱 09 450067677 ,09 450087677 သို့ 👉 👉 ( Feeling Amazing SPA 20% Off)ဟု SMS ပေးပို့လိုက်ပါ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ SMS Coupon Code ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
🙅‍♀️ 🙅‍♀️သတိပြုရန် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️
🚫Feeling Amazing SPA ရဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က - 10:00AM to 10:00 PM ပါ။
🚫Feeling Amazing SPA ကိုမလာခင် ၁နာရီ Booking ကြိုလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။
🚫Feeling Amazing SPA မှာသောကြာ ၊စနေ ၊တင်္နဂနွေ အတွက်ဆိုရင်တော့ တစ်ရက်ကြိုပြီး Booking လုပ်ပေးရပါမယ်။
🚫Groupbuyy မှအစဉ်အမြဲတင်ပေးလျှက်ရှိသော SPA များသည် မိသားစုများနှင့် အမျိးသမီးများအတွက် Relax ဖြစ်စေဖို့ သီးသန့် Family SPA များသာဖြစ်ပါသည်။
Building (6/2), ZezawarHousing(2), Thanthumar Road, South Okkalapa Township
တောင်ဥက္ကလာ ရတနာလမ်းပေါ်က Tulic SPA & Health Club
##Groupbuyy Discount Coupon#20% Coupon Off#Tulic SPA & Health Club
✔️ ✔️ ✔️ပျိုမေတို့ရေ...ခုလိုဆောင်းရာသီကြီးမှာ ➡️အသားအရေ တွေကခြောက်သွေ့ ပျက်စီးပြီး မလှမပဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေရပါသလားးး ➡️ဒါမှမဟုတ် တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေကြောင့် လူလဲအိုမင်းရင့်ရော်လာသလိုခံစားနေရပါသလားးးးမပူပါနဲ့ လုံးဝကို သဘာဝပစ္စည်း 🍈 🍓 🥝 🥑 (Organic )စစ်စစ်တွေကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ 👉 တောင်ဥက္ကလာ ရတနာလမ်းမပေါ် မလိခလုံးချင်းအိမ်ရာဝန်းအနီးမှာရှိတဲ့ 👉 👉Tulip SPA & HealthClub လေးကို Groupbuyy ရဲ့ 20% Discount Coupon လေးနဲ့အတူတူသွားလိုက်ကြစို့………
✔️ ✔️ ✔️ဒီ SPA လေးရဲ့အဓိကအားသာချက်နဲ့ ကိုယ်တွေအကြိုက်ဆုံးအချက်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိတဲ့ သဘာဝကရတဲ့ Organc ပစ္စည်းတွေကို ဘဲအသုံးပြုထားတာပါ။သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အထဲကမှ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး တွေထဲက 👉 👉Organic body treatmentတွေဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီ၊ ဆနွင်း၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့၊ကင်ပွန်းသီး၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်၊ ရွှံ့ စေး ၊ နှင်းဆီ ၊မကျီးသီး စတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်ပေးတာမို့ အမျိုးသမီးများအတွက် အသားအရေသာမက ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။
✔️ ✔️ ✔️ဒီ treatmentဟာ အချိန် ⏰ ⏰ ၂နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့် ကြာမှာဖြစ်ပြီး သစ်သီးများကရတဲ့ အက်စစ်ဓါတ်နှင့် vitamin Cတို့ကို အသုံးပြုကာ အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပြီး အသားအရေကို ဖြူဝင်းလာစေမယ့် treatmentတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီSPA မှာက 👉 👉Facial Form ကအစ Organic ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့ 😱 😱 Amazing….ပါဗျာ..။ 👉Scrub လုပ်ပြီး သန့် စင်သွားသော အရေပြားပေါ်တွင် အသားရေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် Organic oil များဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် အဆုံးမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုနှင့်လန်းဆန်း
ကြည်လင်မှုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ ဒီ SPA လေးမှာ ငါးလေးတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးတဲ့ 👉 👉 Dr.Fish ဝန်ဆောင်မှုလဲရသေးတယ်နော် တော်တော်မိုက်တယ် နောက်ပြီး ဆိုင်ကိုလာဖို့အခက်ခဲရှိသူတွေအတွက်လဲ အိမ်တိုင်ရာရောက်ဝန်ဆောင်မှုလဲပေးပါတယ်နော် သူကတော့ အမျိုးသမီးသီးသန့်အတွက်ပါနော်။
✔️ ✔️ ✔️သတိပြုရမည့်အချက်ကတော့ 📱 📱Tulip SPA ကိုသွားမည်ဆိုရင် ကြိုတင် Booking လေးတော့ လုပ်ဖို့လိုတယ်နော် ဘာကြောင့်ဆို သူက သဘာဝသစ်ဥ သစ်ဖု ပန်းမန်လေးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးရတာဆိုတော့ ကြိုတင်လုပ်ထားရတာလေးတွေရှိနေလို့ပါ။ 👉ဒီ SPA လေးမှာ ခေါင်းအစခြေအဆုံး အလှအပရေးရာအတွက်ရော အသားအရေထိန်းသိမ်းအဖို့အတွက်ရော အညောင်းအညာပါပြေစေဖို့အတွက်ပါ Organic တွေဘဲအဓိက အသုံးပြုပြီး အကုန်အစုံသောဝန်ဆောင်မှုတွေကို အနဲဆုံး 💰 💰4500 ကျပ်ကနေစပြီး ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်။ဈေးနှုန်းတွေကလည်း မဆိုးဘူး တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ဈေးနှုန်းတွေသင့်တဲ့အပြင်ကိုမှ 🌐 🌐Groupbuyy ကနေ Discount Couponနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ 💰 20% Discount ရအုံးမှာနော် wow….အရမ်းမိုက်သွားပြီ 💃 💃 ကဲ..ဒီတော့ ပျိုမေတို့ရေ ဈေးနှုန်းလဲသင့်ပြီး ၂၀% Discount ရမည့် Tublic Oraganic SPA လေးကို သွားကြဖို့ ခုဘဲ Booking လုပ်လိုက်ကြရအောင်ဗျို…..
✔️ ✔️ ✔️Discount Coupon ရရန် Groupbuyy Hotline 📱 📱 📱 09 450067677 ,09 450087677သို့ ( Tublic SPA 20 % off ) ဟု SMS ပေးပို့လိုက်ပါနော်။မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile ထဲသို့ SMS Coupon Code ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
🚫 🚫 🚫 (မှတ်ချက်-Groupbuyy မှပေးပို့လိုက်သော Discount Coupon Code ကိုသက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ကောင်တာသို့ပြသပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိပြီး Discount Coupon Code မပြနိုင်ခဲ့ပါကပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
🚫 🚫 🚫 Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။၀ယ်ယူစားသုံးသူများသက်သာအောင် Discount Coupon ထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
🔛 🔛 🔛လိပ်စာ 🔛 🔛 🔛
No.1253 , Yadanar St, Dawa Daha Quarter ,South Oakkalar Tsp, Yangon.
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် California Skin SPA
💆ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေလေး ဖြူဝင်းကြည်လင်သော အလှ ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ချင်ပါသလား?
မိမိမျက်နှာလေးကို အသားအရေတင်းပြီး အကူအညီမလိုတဲ့ Natural Beauty အလှပိုင်ရှင် ဖြစ်ချင်သူများ ရှိနေပါသလား?
👉 👉California Skin Spa တွင် မိမိမျက်နှာလေးကို ပိုးသားလေးလိုနူးညံ့ပြီး Natural Beauty လေးလို လှပနေစေမည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေလေး ဖြူဝင်းကြည်လင်လာစေဖို့အတွက် အထူး Spa ၀န်ဆောင် များနှင့်စောင့်ကြိုနေပြီး သက်သာသောဈေးနှူန်းများရရှိရန်…..Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ……….
Groupbuyy ph: ☎ 📞09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီး SMS Coupon
ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန်
အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 💻 📲www.groupbuyy.com.mm Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
###Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 📞 ☎ 09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
• ❤️Product Code – CSS 001 (မိမိ ရယူလိုသော ၀န်ဆောင်မှူအမျိုးအစား)
• ❤️Qty –2or3(သွားရောက်မည့် လူအရေအတွက်)
• ❤️DTG – 29.9.2016
☝️လတ်တလော ရရှိနိုင်သော ၀န်ဆောင်မှူများ ####
(1)Product Code – CSS 001 (OMEGA Light Treatment)
(2)Product Code – CSS 002 (Microzone Treatment)
(3)Product Code – CSS 003 (Shampoo & Blowing)
(4)Product Code – CSS 004 (Nourishing Sea Mud Therapy)
💰 💰၀န်ဆောင်မှူများ၏ ဈေးနှူန်းအသေးစိတ် ####
👉1)Product Code – CSS 001 (OMEGA Light Treatment)
• Normal Price – 85000 Ks
• Groupbuyy Price – 59500 Ks
• (Save Your Money) – 25500 Ks
👉2)Product Code – CSS 002 (Microzone Treatment)
• Normal Price – 30000 Ks
• Groupbuyy Price – 15000 Ks
• (Save Your Money) – 15000 Ks
👉3)Product Code – CSS 003 (Shampoo & Blowing)
• Normal Price - 10000 Ks
• Groupbuyy Price – 5000 Ks
• (Save Your Money) – 5000 Ks
👉4)Product Code – CSS 004 (Nourishing Sea Mud Theraphy)
• Normal Price – 50000 Ks
• Groupbuyy Price – 40000 Ks
• (Save Your Money) – 10000 Ks
### ☝️၀န်ဆောင်မှူများ ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက် ###
OMEGA Light တွင်ပါဝင်သော Treatment ၀န်ဆောင်မှုများကတော့…….
👌ပထမအဆင့် မှာကတော့ Consultation Card ဖြည့်တာ လုပ်ပါမယ်..
👌ဒုတိယအဆင့် အနေနှင့် Pre Clean အရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်ပြီးမှ
👌တတိယအဆင့် အနေနှင့် Double Clean လုပ်ပါမယ်………
👌စတုတ္ထအဆင့်မှာ အသားအရေ အမျိုးအစား ဆန်းစစ်ပေးခြင်း
👌ပဉ္စမ အဆင့်မှာ Exfoliate (Scrub) ပြုလုပ်ပေးပါမယ်……..
👌ဆဠမ အဆင့်မှာ Extractions လုပ်ခြင်း
👌သတ္တမ အဆင့်မှာ Toner ဖြန်းပေးခြင်း
👌အဠမ အဆင့်မှာ Pressure point massage လုပ်ပေးခြင်း
👌နဝမ အဆင့်မှာ Masque (ပေါင်းတင်ခြင်း)ကို ပြုလုပ်နေချိန်တွင် မိမိ အသားအရေ နှင့် သင့်လျော်သော OMEGA Light Treatment ပေးခြင်း
နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနှင့် Booster, Moisturizes နှင့် SPF လိမ်းပေးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်
☝Dermalogica Brand ကို သာ အသုံးပြုပါသည်။
မျက်နှာ အတွက်ဖြစ်ပြီး Microzone Treatment တွင်ပါဝင်သော ၀န်ဆောင်မှု
☝ပထမအဆင့် မှာကတော့ Pre Clean အရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်ပြီးမှ
☝ဒုတိယအဆင့် အနေနှင့် Double Clean လုပ်ပါမယ်………
☝တတိယအဆင့် အနေနှင့် Exfoliate (Scrub) ပြုလုပ်ပေးပါမယ်……..
☝စတုတ္ထအဆင့်မှာ Masque (ပေါင်းတင်ခြင်း)ကို ပြုလုပ်ပါတယ်……
☝နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနှင့် Toner နှင့် Moisturizes ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်……
Dermalogica Brand ကို သာ အသုံးပြုပါသည်။
Shampoo & Blowing မှာကတော့ PAULMICHELL Colour Protect Shampoo & Conditioning တို့ နှင့် (၁၀)မိနစ် ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်း အပြင် ဆံပင်ကို ပုံသွင်းပေးခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်………
(4)Product Code – CSS 004 (Nourishing Sea Mud Theraphy)
Body အတွက်ဖြစ်ပြီး Nourishing Sea Mud Theraphy ကတော့ ပထမဆုံး Body Scrub ပြုလုပ်ပေးပြီး Body တခုလုံးကို Mask အုပ်ပြီး Warp လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…….ပြီးနောက် Body Lotion လိမ်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ….
ယခု Treatment ကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်သေ များ ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေမှာကြည်လင် ချောမွေ့စေသည့် အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေ ကာ အသား အရေအတွက် အဟာရဓာတ်ကိုလည်း ဖြည့်စွမ်းပေးပါသည်.
## 🚨 🚨သတိပြုရန်##
ဆိုင်ဖွင့် ချိန် - မနက် ၁၀း၀၀ မှ ည ၈း၀၀ အထိ
စနေ -တနင်္ဂနွေ မှာ ကြို တင် Booking လုပ်ရပါမည်။
• Groupbuyy Discount Coupon Code သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ …။
• ၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်ပါသည်။
( မှတ်ချက်-Gruopbuyy မှပြန်လည်ပို့ ပေးလိုက်သော SMS (သို့ မဟုတ် ) www.groupbuyy.com.mm မှ ထုတ်ပေးလိုက်သော ကူပွန်ကုဒ်ကိုကောင်တာတွင်မပြနိုင်ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာရှင်းပေးရပါမည်)
## 🍀Groupbuyy ဆိုသည်မှာ……
www.groupbuyy.com.mm ဆိုတာ မြန်မာပြည် ရှိ အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်ပ်တို့နေ့စဉ်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပေးလျှက်ရှိသောလျှော့ဈေးသတင်းများမှာ Restaurants, Spas,Things to do , Nightlife , Massages, Salons , Hotels , Education စသည့် Sector များဖြစ်ပြီး ယခုပင် သင့်အသုံးစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ရန် လျော့ဈေးကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ…။
www.groupbuyy.com.mm ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့်အတွက်
## 🚘 🚘လိပ်စာ ##
အမှတ်- ၅၆၊ အခန်း ၂၀၃၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်
မြ၀တီလမ်း ၊ မြေနီကုန်း ၊ စမ်းချောင်: Amara Beauty & Hair Salon
#Groupbuyy #Discount Coupon #Amara Beauty & Hair Salon #Oil Massage #Body Scrub #Up to 20% off
💆 💇 💇မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှတရားများနှင့် မြင်သူတ
ကာငေးမောကြည့်ရှူ ရလောက်အောင်ပင် ယုံကြည်မူရှိတဲ့
👍Amara Hair Salon မှာမိမိအလှတရားများကိုသက်သာသော
Groupbuyy ph 📞 ☎️09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီး SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 📲 📱www.groupbuyy.com.mm website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
##Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 📞 ☎️09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
• 😻Product Code – AHS 001(မိမိရယူလိုသောဝန်ဆောင်မူအမျိုးအစား )
• 👭QTY – 1 ( သွားရောက်မည့် လူအရေအတွက် )
• 📅DTG – 18.5.2016 ( သွားရောက်မည့် နေ့ရက် )
##လက်တလောရရှိနိုင်သော Amara ၏ ၀န်ဆောင်မှူအမျိုးအစား ##
(1) 💜Product Code – AHS 001 (Manicure & Pedicure Services (O.P.I))
(2) ❤️Product Code – AHS 002 (Body Oil Massage)
(3) 💚Product Code – AHS 003 (Body Scrub, Sauna, whitening)
(4) 💙Product Code – AHS 004 (Facial Treatment)
##Amara ၀န်ဆောင်မူ တစ်ခုချင်းဆီ၏ ဈေးနူန်းအသေးစိတ်အချက်အလက် ## 💰 💰 💸 💸
(1) 💇Product Code – AHS 001 (Manicure & Pedicure Services (O.P.I))
• Normal Price – 14000 Ks
• Groupbuyy Price – 11900 ks
• ( Save Your Money – 2100 Ks )
(2) 💆Product Code – AHS 002 (Body Oil Massage)
• Normal Price – 15000 Ks
• Groupbuyy Price – 12000 Ks
• ( Save Your Money – 3000 Ks )
(3) 🙋Product Code – AHS 003 (Body Scrub, Sauna, whitening)
• Normal Price – 25000 Ks
• Groupbuyy Price – 20000 Ks
• (Save Your Money – 5000 Ks )
(4) 💁🏻Product Code – AHS 004 (Facial Treatment)
• Normal Price – 35000 Ks
• Groupbuyy Price – 29750 Ks
• ( Save Your Money – 5250 Ks )
## 💥 🎉၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းဆီဧ။် ထူးခြားချက်များ ##
(1) ❤️Product Code – AHS 001(Manicure & Pedicure Services (O.P.I))မှာတော့ O.P.I Products ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Hand & Foot
• Nail Scrub & Wax
• Gel Polish တို့ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
• Amara Hair Salon မှာ Manicure & Pedicure
Services ပြုလုပ်သူများအတွက် Free Bleaching ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
(2) 💛Product Code – AHS 002 (Body Oil Massage) ကတော့
• Oil Massage တို့ပြုလုပ်ပေးပါမည်….။
Sat – Sun Day မှာ Body Oil Massage ပြုလုပ်မည့် သူများအတွက် ကြိုတင် Booking ပြုလုပ်ထားရပါမည်..။
(3)Product Code – AHS 003 (Body Scrub, Sauna, whitening) ကတော့
• Body Scrub ပြုလုပ်ပေးခြင်း
• Body Sauna ချွေးထုတ်ပေးခြင်း
• Body Whitening အသားဖြူအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
• အသားအရေ စိုပြည်စေရန် Body Soak ပြုလုပ်ပေးခြင်း
• Massage Lotion လိမ်းပေးခြင်း ပါဝင်ပါသည်…။
(4) 💜Product Code – AHS 004 (Facial Treatment) မှာတော့ မျက်နှာတခုလုံး လှပစေရန်အတွက် (SK II skincare product) သုံးထားပါသည်….။
• Face Scrub ပြုလုပ် ပေးခြင်း ၊
• Face Mask ပြုလုပ်ပေးခြင်း
• Face Massage စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်..။
Amara Hair Salon မှ Customer များအတွက် အကောင်းဆုံး Product
များနှင့် International Standard Brand များကို အသုံးပြု၍
Customerများ စိတ်ကျေနပ်မှူရရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည် ။
• Free Coffee+Tea
##သတိပြုရန်### 🚨 🚨 🚨
• ၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်ပါသည်..။
(မှတ်ချက်-Gruopbuyy မှပြန်လည်ပို့ ပေးလိုက်သော SMS (သို့ မဟုတ် ) www.groupbuyy.com.mm မှ ထုတ်ပေးလိုက်သော ကူပွန်ကုဒ်ကိုကောင်တာတွင်မပြနိုင်ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာရှင်းပေးရပါမည်)
##Groupbuyy ဆိုသည်မှာ 👈 👈……
www.groupbuyy.com.mm ဆိုိုသည်မှာ မြန်မာပြည် ရှိ အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို
အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
များမှာ Restaurants, Spas,Things to do , Nightlife , Massages,
Salons , Hotels , Education စသည့် Sector များမှဖြစ်ပြီး ယခုပင် သင့်အသုံးစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ရန် လျော့ဈေးကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ…။
www.groupbuyy.com.mm ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
##လိပ်စာ # 🚘 🚘
အမှတ်-(၁၂-A) မြေညီထပ် ၊ မြ၀တီလမ်း ၊ မြေနီကုန်း ၊ စမ်းချောင်:
Mingalaw Taung Nyunt Township, Esperado SPA
#off 50% Spa Deal #Hotel Esperado #Discount Coupon #Groupbuyy #Skincare and relaxation
#Esperado Hotel Blossom Spa တွင် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကျေနပ် စေမည့်ဝန်ဆောင်မှူများကို 50 % Discount များနှင့် အထူးလျော့ဈေးများ နှင့် အတူ သွားရောက် အပန်းဖြေနိုင်ရန် Groupbuyy သို့ အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Groupbuyy ဖုန်း 09450067677 SMS ပို့ပြီး (သို့ မဟုတ်) ဖုန်းဆက်ရန် နှင့် SMS ပို့ ပြီးကူပွန်မထုတ်ချင်သူများအတွတ်လည်း
www. groupbuyy.com.mm website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ပြီး Discount ကူပွန် ထုတ်ယူလိုက်ပါ
#Discount Code ရရန် Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 09-450067677 သို့ပို့ရမည့်SMS နမူနာပုံစံ
• Code- ESP 001 (Spa ၀န်ဆောင် အမျိုးအစား)
• Qty - 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
• DTG -29.4.16 (သွားမည့်နေ့)
#ယခု လတ်တလော ရရှိ နိုင် တဲ့ ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစားများ
(1) Product Code – ESP 011 (Back & Shoulder Massage)
(2) Product Code – ESP 022 (Body Wrap Therapy)
#၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစားတွေ ရဲ့ ဈေးနှုန်း အသေးစိတ်
#Product Code – ESP 011 (Back & Shoulder Massage)
• Normal Price – 25 ++ USD (45 min)
• Groupbuyy Price- 12.5 ++ USD
• (Save Your Money - 12.5 USD)
#Product Code – ESP 022 (Body Wrap Therapy)
• Normal Price – 40 USD (60 min)
• Groupbuyy Price- 20 ++ USD
• (Save Your Money - 20 USD)
#၀န်ဆောင်မှူ တစ်ခုချင်းစီ ၏ ထူးခြားချက်များ
#Product Code – ESP 0011 (Back & Shoulder Massage)
-Back&ShorderMassageကိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများကိုယူပြစ်လိုက်သလို ပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
-ကျောဘက်ကိုမှောက်အိပ်စေပြီး ကျောပြင်တစ်ခုလုံးကိုနှိပ်နယ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးလန်းဆန်းစေမှာပါ သွေးလေလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေတဲ့ အတွက် ခန္ဓာကိုယ် tissue တွေပြန်လည်လန်းဆန်းကာ နာကျင်ကိုက် ခဲမှုဝေဒနာတွေကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
#Product Code – ESP 022(Body Wrap Therapy)
- Body warp therapy
ဟာဆိုရင် သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက် အသားအရေကိုအဟာဖြစ်စေကာ ကြည်လင်ဝင်းပစေမှာပါ။
- ဂျုံပင်မှရတဲ့ protein နဲ့ ပျားရည်ကို သမအောင်ရောစပ်ထားတဲ့ cream ကို အသုံးပြုပြီးတော့ massage လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရေဓာတ်ကိုပြန်လည်အားဖြည့်ပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစိုပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
-သံလွင်ဆီ ၊ စပျစ်စေ့ ရဲ့အဆီအနှစ်တို့ နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ massage oil နဲ့ နှိပ်နယ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အသားအရေကို ပြန်လည်တင်းရင်းစေကာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Service Charges နှင့် Government Tax နှစ်ခုပေါင်းပြီး ၁၅% ပေးဆောင်ရမည်။
- အချိန် : နံနက် ၉:၀၀ am မှ ည ၁၁:၀၀
(Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သောSMS(သို့)www.groupbuyy.com.mm မှ ထုတ်ပေးလိုက်သော DISCOUNT Coupon ကို ပြနိုင်ခဲ့လျှင် အထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ခံစား ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး SMS မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာရှင်းပေး ရပါမည်။)
No-23, KanYeakTar Street,
Mingalaw Taung Nyunt Township,
Kamayut Township Beauty Heaven Salon & SPA
🌐Groupbuyy.com 🎟☏ #Discount Coupon #Yangon #Beauty Heaven 💇 💆 👯 #Up to 25 %off
😎အချိန်တိုအတွင်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်သော နုပျိုလှပမှုကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါသလား???
🚩ကျော အောင့်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား???
🚩Body Spa ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်ပါသလား??
🚩Beauty heaven Spa မှာ ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများကိုပျောက်ကင်း
လိုသူများအတွက် အထူးလျော့ဈေးနှူန်းများ ရရှိနိုင်ရန် Groupbuyy မှ Discount Coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
🌐Groupbuyy ph: 09 450067677,09450087677 📞 ☎ သို့ဆက်သွယ် ပြီး SMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများ အတွက်လည်း 🌐www.groupbuyy.com.mm သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
🚩###Discount Code ရရန် 🌐website ကောဖုန်းဆက်ရန်ပါအဆင်မပြေသူများအတွတ် 🌐 Groupbuyy.com ဖုန်းနံပါတ် ☎ 📞09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ
🔴• Protuct Code – BHS (မိမိရယူလိုသော Spa ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား )
🔴• Qty - 1 ( သွားရောက်မည့် လူဦးရေ )
🔴• DTG -3.3. 2017 ( သွားရောက်မည့် နေရက် )
#လတ်တလော ရရှိ နိုင် တဲ့ ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစားများ #
• 🍭 (1) Product Code – BHS 001 (ကျော Spa)
• 🍭(2) Product Code – BHS 002 (Facial Treatment)
• 🍭(3) Product Code – BHS 003 (Body Spa)
💱#Beauty Heaven ၏ဈေးနှုန်း အသေးစိတ်အချက်အလက် # 💲 💲
💆(1) Product Code – BHS 001 (ကျော Spa)
• Normal Price – 30,000 Ks
• Groupbuyy Price – 22,500 Ks
• ( Save Your Money – 7,500 Ks )
💆(2) Product Code – BHS 002 (Facial Treatment)
• Normal Price – 35,000 Ks
• Groupbuyy Price – 26,250 Ks
• ( Save Your Money –8,750 Ks )
💆(3) Product Code – BHS 003 (Body Spa)
• ( Save Your Money – 8,750 Ks )
🔴#Beauty Heaven ၏ထူးခြားချက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ #
🚩(1)Product Code – BH 001 (ကျော Spa)
ကျောအောင့်၊ ဇက်ကြောတက်တဲ့သူတွေ၊ Aircon အခန်းထဲအနေများတဲ့သူ ၊ ကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့သူတွေ အတွက် ဆေးဖက်ဝင်သော ဆီများကိုအသုံးပြုကာ နှိပ်နှယ်ပေးသည့်အတွက်စိတ်ရောလူပါ
relax ဖြစ်စေသည့်အပြင် အရေပြားကိုပါ ကျန်းမာ ဝင်းမွတ်စေသည့် အကျိုးကျေးဇူးကိုပါ ရရှိစေမှာပါ ။
🚩(2) Product Code – BH 002 (Facial Treatment)
Facial Treatmentကိုအဆင့်(၄)ဆင့်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်
ပထမအဆင့်အနေ နဲ့ မျက်နှာ Cleasing လုပ်ပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ Mask အုပ်ပေးပါသည်။
🚩 (3) Product Code – BH 003 (Body Spa)
Body Spa ဟာ Brand ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။
တကိုယ်လုံး ချီးချွတ် ပြီး ဆောင်နာထိုင် ချွေးထုတ်ပြီး Spa ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Body Spa ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆဲလ်များအတွင်းသွေးလည်ပတ် မှု ကောင်းမွန်ကျန်းမာလာစေခြင်း၊ ချွေးပေါက်များကို ပြန်ကျဉ်းပေးခြင်း
အသားအရေလေးမှာ မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင် ငေးကြည့်ရလောက် တဲ့အသားအရေ လေးကိုပိုင် ဆိုင်စေမှာပါ။
## 🔴သတိပြုရန် 🔴#
ကြိုတင်၍ Booking 1 နာရီလုပ်ရပါမည်။
• (မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါက
Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
• Groupbuyy Discount Coupon 🌐 သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။
• ၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
## 🚩Groupbuyy ဆိုသည်မှာ……
🌐www.groupbuyy.com.mmဆိုတာ မြန်မာပြည်ရှိအမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
Customer များအနေနဲ့ ကူပွန်အသုံးပြုရာတွင်အဆင်မပြေမှု များဖြစ်ပေါ် ပါက Customer Care Hotline 09-450067677
ကျွန်ပ်တို့နေ့စဉ်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပေးလျှက်ရှိသောလျှော့ဈေးသတင်းများမှာ Restaurants, Spas,Things to do , Nightlife , Massages, Salons , Hotels , Education စသည့် Sector များဖြစ်ပြီး ယခုပင်သင့်အသုံးစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ရန် လျော့ဈေးကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ…။
www.groupbuyy.com.mm ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
# 🚐#လိပ်စာ# 🚐#
No.7, Aung Chan Thar (5) St, 1st Quarter, Kamayut Township, Yangon
Vintage Luxury Yacht SPA
##Groupbuyy Discountn Coupon #10% off SPA # Vintage Luxury Yacht
🛳 🛳 🛳ခုလိုဆောင်းရာသီ အေးအေးလေးမှာ တနေ့တာပင်ပမ်းသမျှတွေကို ဇိမ်ကျကျအပမ်းဖြေချင်သူများ အတွက်ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့် နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအရမ်းကို စိတ်ကျေနပ်စေမဲ့ SPA လေးတစ်ခုနဲ့ 💯Groupbuyy Coustomer များကိဲု့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ.........
🛳 🛳 🛳သူကတော့ ရန်ကုန်မြစ်ကြီးရဲ့အလှအပတွေ ကိုပါခံစားလိုံရမဲ့ 👉 Vintage Luxury Yacht Hotel 👈 မှာရှိတဲ့ SPA လေးပါ ဆိုင်ရဲ့သပ်ရပ်ပြီးခမ်းနားတဲ့  ဒီဇိုင်းတွေကြောင့်ဈေးကြီးမယ်လို့ လုံးဝမထင်နဲ့နော်ဈေးနှုန်းတွေက တကယ်ကိုမိုက်တာ (မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ ကနေ ၄၀၀၀၀) ဝန်းကျင်ထိဘဲဆိုတော့ ဘယ်မှာမှတော်ရုံမရနိုင်တဲ့  ဈေးနှုန်းနော် တကယ်ကိုသွားသင့်တဲ့ SPA
🛳 🛳 🛳 10% off Discount coupon အခမဲ့ ထုတ်​လို့၇​အောင်​ နည်း​လေးလည်း​အောက်​မှာထည့်​ ​ပေးထားတယ်​​နော်​
💜 💜##website မှတစ်ဆင့် Discount Code ရရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း ဖုန်းနံပါတ် 📞 📞09450067677, 📞 📞09450087677သို့ 💯 Total Bill 10% off ကူပွန်ရယူလိုပါက 🛳 ↔ ↔(Vintage Luxury Yacht Spa Total Bill 10% off ) ↔ ↔ ဟုရိုက်၍ SMS ပေးပို့ပြီး ကူပွန်ရယူနိုင်ပါသည် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile phone ထဲကို SMS ပြနိပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်
👉Vintage Luxury Yacht SPA ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု 👈
💯Groupbuyy ကနေ Discount Coupon လေးထုတ်ပြီးသွားလိုံရပါတယ်နော် 👉Groupbuyy ph: 09450067677 /09450087677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS 🚩 ပေးပို့ရုံဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်း
အဝေယာလမ်း ၊ ဘောက်ထော် ရန်ကင်း Beauty & Beyond SPA
# Groupbuyy#Discount Coupon #Salon & Spa # Beauty & Beyond Salon & Spa
🌐Groupbuyy 🌐 အမာခံ Coustomer များအတွက် ဆောင်းရာသီအေးအေးလေးမှာ 💄 👯‍♀️ 💆‍♂️လှလှပြင်ပြီး ဇိမ်ကျကျ အညောင်းအညာပါ ပြေနိုင်မဲ့ 💝 Salon & Spa လေးရဲ့ အမိုက်စား Special Discount တွေပေးတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပေးချင်တယ်နော်။
(မိမိဖုန်းထဲ Discount Coupon လေးတွေအခမဲ့ ထုတ်ယူနည်းလေးပါအောက်မှာ ထည့်ပေးထားတယ်နော်။)
👉 👉 ဒီဆိုင်လေးက ကျောက်မြောင်း မှာရောရန်ကင်းဘောက်ဘောက်ထော်မှာပါ ဖွင့်ထားတဲ့ 👯‍♀️ 👯‍♀️Beauty & Beyond Salon & Spa လေးးပါ …….
👉 👉 .ဒီဆိုင်လေးမှာဆိုရင် Hair ,Facial , Waxing ,Body spa , Nail အကုန်ရတာဆိုတော့ တစ်နေရာထဲမှာဘဲစုံစုံလင်လင်ရနိုင်တဲ့အတွက် 😎 😎 😍 တကယ်မိုက်တာနော် အဲ့ဒါတွေအပြင် 💆‍♀️ 💙 💙 မျက်တောင်ဆက်တာတို့ Eyebrow tattoo တွေလဲရသေးတယ် Hair ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆံပင်ဆက်တာကိုလည်း Tape extension နည်းနဲ့ ဆက်ပေးတာပါ ဦးရေပြားလဲနာမှာမကြောက်ရသလိုတော်တော်ကြာကြာလဲခံပါတယ်
👉 👉 💙 Oil massage နဲ့ 💙 Nail art ပိုင်းတွေကို OPI Brand နဲ့သုံးပေးထားတာပါ Beauty & Beyond မှာဆေးကို Brand ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုဘဲသုံးပေးထားတဲ့အပြင် ဝန်ဆောင်မှုကလည်းပြောစရာမလိုအောင်အရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် လုံးဝစိတ်ကျေနပ်စေမှာအမှန်ဘဲနော်
👉 👉 Beauty & Beyond ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေက 😮 😉 5000 ဝန်းကျင်ကနေစပြီးအစားစားရှိပါတယ် ခုဆိုရင် 👉 Beauty & Beyond ကနေ 💰 💰 Special Discount 25% ကြီးတောင်ပေးနေတာနော် အဲ့ဒါအပြင် 👉 400,00 ဖိုးနဲ့အထက် သုံးမျိုးဆိုရင် 💃 💖 💝 40 % Discount ပါတဲ့နော် ( ဝိုးတကယ် Good တာဗျို့ ) ဝန်ဆောင်မှုကလည်းကောင်းပြီး ပစ္စည်းကောင်းကောင်း Brand ကောင်းကာင်းတွေကိုဘဲ သုံးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမဲ့အပြင် ခုလို Discount အမိုက်စားကြီးနဲ့ဆိုတော့ Groupbuyy Coupon coustomer များဘာမှစဉ်းစားမနေဘဲ တကယ်ကိုသွားသင့်တဲ့ဆိုင်လေးပါလို့ အကြံပေးလိုက်တယ်နော်………..
👉 👉 Discount Coupon လေးရရှိနိုင်ရန် 💙 💙 Groupbuyy phone 09450067677,450087677 သို့( Beauty & Beyond Salon & Spa 25 %) ဟု SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း မိမိ Mobile Ph ထဲသို့ SMS ပြန်ပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်……………..
⏰ ⏰ သတိပြုရန် ⏰ ⏰
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် - 9:00AM to 9:00 PM ပါ
ကျောက်မြောင်းဆိုင် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️-တင်္နလာနေ့တိုင်းပိတ်ပါတယ်
ရန်ကင်းဆိုင် 🙅‍♀️ 🙅‍♀️-ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းပိတ်ပါတယ်
(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကိုသက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်
ကောင်တာသို့ပြပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Code ကိုမပြနိုင်ခဲ့ပါက
ဝယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေးသော Company ဖြစ်သည်။
🚗 🚗 🚗 🚗 လိပ်စာ 🚗 🚗 🚗 🚗
Beauty& Beyond (1)
အမှတ် (၇၈) ၊မြညီထပ် ၊ကျောက်မြာင်းလမ်းမကြီး ၊မြို့သစ် (၁)လမ်းနှင့် မြိုံသစ် (၂) လမ်းကြား၊ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် ၊ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ် (၃၁) ၊ အဝေယာလမ်း ၊ ဘောက်ထော် ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်မြို့။
East Myin Pyaing Gwin Road The SPA Elegance
#Groupbuyy #Discount Coupon #The Spa Elegance #Beauty #Fresh #Up to 20% off
#The Spa Eleganceတွင်မိမိ၏မျက်နှာအလှကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်
ဖန်တီးလိုသူများနှင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုများကိုပျောက်ကင်းသွားစေရန် နွေးေ
ထွးပျူဌာသော ၀န်ဆောင်မှူများနှင့် ကြိုဆိုလျှက်ရှိပြီး သက်သာသော
အထူးလျော့ဈေးနှူန်းများ ရရှိနိုင်ရန် #Groupbuyy သို့ စဉ်းစားစရာ မလိုပဲ အခုပဲ
#Groupbuyy ph: ☎️ 09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီး ကူပွန်ထုတ် ရန်အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း www.groupbuyy.com.mm Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
#Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် ☎️09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ#
• (1)Product Code – TSE 001 ( မိမိရယူလိုသော Spa ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား)
• Qty – 1 ( သွားရောက်မည့်လူဦးရေ )
• DTG – 9.9.2016 ( မိမိသွားရောက်မည့်နေ့ရက် )
##လတ်တလောရရှိနိုင်သော Spa လျော့ဈေး ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစားများ##
• (1)Product Code – TSE 001 (Thai Dry Massage for 1 Hour)
• (2)Product Code – TSE 002 (Oil Massage for 1 Hour)
• (3)Product Code – TSE 003 (Body Spa for 1Half Hours)
• (4)Product Code – TSE 004 (Classic Facial Treatment for 1 Hours)
##The Spa Elegance ရှိဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဈေးနူန်းအသေးစိတ်##
(1)Product Code – TSE 001 (Thai Dry Massage for 1 Hour)
• Normal Price – 15,000 Ks
• Groupbuyy Price – 12,000 Ks
• (Save Your Money) – 3,000 Ks
(2)Product Code – TSE 002 (Oil Massage for 1 Hour)
• Groupbuyy Price – 24,000 Ks
• (Save Your Money) – 6,000 Ks
(ဆီပါ တစ်ကိုယ်လုံး နှိပ်နည်း)
(3)Product Code – TSE 003 (Body Spa for 1Half Hours)
• Normal Price – 40,000 Ks
• Groupbuyy Price – 32,000 Ks
• (Save Your Money) – 8,000 Ks
(4)Product Code – TSE 004 (Classic Facial Treatment for 1 Hour)
#The Spa Elegance လျော့ဈေးဝန်ဆောင်မှူ များ၏ အသေးစိတ်နှင့်ထူးခြားချက်များ#
##AboutThe Spa Elegance တွင်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Brand အမျိုးအစား များကိုသာအသုံးပြုပါမည်။
USA နှင့် Thai မှ အဆင့်မြင့် Brand များဖြစ်သော
• PAUL MITCHELI
. NYX အစရှိသော Brand များနှင့်သာ အသုံးပြု ပါသည်။
Massage ပြုလုပ်ရာတွင် နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြီး……….
• Thai မှ Massage ပညာရှင်နှင့် Massage လုပ်လျှင် Normal Price - 18000 Ks အပေါ်တွင် 20% Discount ဈေးနှူန်း ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်သည်။
• Local မှ Massage ပညာရှင်နှင့် Massage ပြုလုပ် လျှင် Normal Price – 15000 Ks အပေါ်တွင် 20% Discount ဈေးနှူန်းခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်သည်။
• Thai ရိုးရာ နှိပ်နည်း ဖြင့် Massage လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
• ၁နာရီ ကြာမြင့်အောင် Massage လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
• ညောင်းညာ ကိုက်ခဲနာကျင်မှုကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
• ညင်သာညက်ညော စွာ နှိပ်နယ် ပြီး ကြွက်သားများကို ပြေလျှော့စေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
• ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေမယ်၊ခန္ဓာကိုယ် က အောက်စီဂျင်ကို အပြည့်အဝ စုပ်ယူနိုင်ပြီး သွေး လည်ပါတ်မှု့ကိုကောင်းစေမယ် ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျှော့ ပြီးတော့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေ မယ် ဒါတွေကတော့ Oil Massage ရဲ့ ထူ့ခြားချက် တွေပါပဲ။
• Aroma Oil နှင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး Aroma Oil Massage ဟာ အနောက်တိုင်း ခန္ဓာဗေဒ နဲ့ စိတ်ပညာ ရပ်တို့ ကိုပေါင်းစပ် အခြေခံထားတဲ့ အနောက်တိုင်း အနှိပ်ပညာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သူက Oil massage အမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ် The Spa Elegance မှာတော့ သံလွင်ဆီ စစ်စစ်ကနေ ထုပ်ထားတဲ့ Aroma Massage Oil ကိုအသုံးပြုပါတယ် ။
• Oil Massage ပြုလုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ညင်သာပြီး ငြိမ့်ငြောင်းတဲ့ အထိအတွေ့ နဲ့ မွေးပျံ့တဲ့ သင်းရနံ့တွေ ဟာလဲ အလွန်အရေးပါပါတယ် ။
• Oil Massage ကို ၁ နာရီကြာ အထိဝန်ဆောင်မှု့ပေးပါတယ်။
• ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေမယ်၊ခန္ဒာကိုယ် က အောက်စီဂျင်ကို အပြည့်အဝ စုပ်ယူနိုင်ပြီး သွေး လည်ပါတ်မှု့ကိုကောင်းစေမယ် ပြီးတော့ ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျှော့ ပြီးတော့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေ မယ် ဒါတွေကတော့ Oil Massage ရဲ့ ထူ့ခြားချက် တွေပါပဲ။
• ညောင်းညာကိုက်ခဲမှုကို ပျောက်ကင်းစေ ပါသည်။
• Aroma therapy Massage ဟာစိတ်ဖီးစီးမှုရှိသူများနှင့် သွေးလည်ပတ်မှုမရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကုသပေးပါသည်။
• စွမ်းအင်ကုန်ခမ်းနေသူများအတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါသည်။ ထို့နောက်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုကိုလည်းသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။
• Body Spa ပြုလုပ်ရာတွင် နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိပြီး ……….
• Body Spa လုပ်ရာတွင် Thai Brand နှင့် ပြုလုပ်လျှင် Normal Price – 40000 Ks အပေါ်တွင် 20% Discount ဈေးနှူန်းခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်သည်။
• Body Spa လုပ်ရာတွင် USA Brand နှင့် ပြုလုပ်လျှင် Normal Price – 60000 Ks အပေါ်တွင် 20% Discount ဈေးနှူန်းခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်သည်။
• Body Spa ပြုလုပ် ခြင်းက အခုနောက် ပိုင်း အမျိုးသမီးတော်တော် များများ စိတ်ဝင်စားမူ့ရှိလာတဲ့ body treatment တစ်ခုဖြစ် ပါတယ် ။ အဓိက အနေနဲ့ body ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေ တွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ နဲ့ အတူ အရေပြားကို နုးညံ့ စေပြီး ချောမွတ်စေပါတယ်။
• Body Spa ပြုလုပ်ချိန်မှာ ၁ နာရီခွဲ ကြာမြင့်မှာဖြစ်သည်။
• အသားအရေးလေးမှာမိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင် ငေးကြည့်ရလောက် တဲ့အသားအရေ လေးကိုပိုင် ဆိုင်စေမှာပါ။
• Body Scrub ပြုလုပ် ရာမှာ အဓိက အနေနဲ့ ဆား သကြား သဲ စတဲ့ အမှုန် လေးများ နဲ့ဆီ လို cream လိုအရာမျိုး နဲ့ အတူရောစပ်ထား ပြီး အရေပြားကို နာကျင်ခြင်းအများကြီး မဖြစ်စေဘဲ ပွတ်တိုက် ခြင်းပြုလုပ်ရပါတယ်။ ပြုလုပ်မှူအဆင့်များအနေဖြင့် steam ထိုင်၊ scrub တိုက်ပေးပြီးနောက် lotion လူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံမှန် Treatment ပြုလုပ်သွားခြင်း ဖြင့် နဂိုအသားအရည်ထက် ပိုမိုဝင်းလဲ့ ကြည်လင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
(4)Product Code – TSE 004 (Classic Facial Treatment for 1 Hours)
Cleansing Oil ဖြစ်ပြီး kukui သီး၊ Borage အဆံ ၊ ဖွဲနုဆီ နှင့်အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေပါသည်။
#STAGE -2Special cleansing gel
အသားအရေ အမျိုးအစားအားလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သဘာဝသစ်ဥ သစ်ဖု များနှင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အရေပြားခြောက်ခြင်း ၊ တင်းခြင်း တွေကောင်းမွန်စေပါသည်။
#STAGE -3Daily microfoliant
ဆန်ကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသော enzyme အမှုန့်မှ အရေပြားမွဲခြောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားရေကို သိသာစွာ ၀င်းပချောမွေ့စေပါသည်။ တင်းတိပ် ၊ မှဲ့ခြောက် တွေလည်း လျော့ပါးစေပါသည်။
#STAGE -4Scaling fluid
အဖုလေးများနှင့် ပိတ်ဆို့နေသော အဆီအနှစ်အညစ်ကြေးများထဲကို ပျော်ဝင်သန့်စင် စေပါသည်။ ဆားဝက်ခြံညှစ်ရာတွင် နာကျင်မှုမရှိဘဲ လွယ်ကူစေပါသည်။
#STAGE -5Post extraction solution
ဆားဝက်ခြံညှစ်ပြီး ချိန်တွင် အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် မွေးညှင်းပေါက်လေးများ ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
#STAGE -6Massage cream
ရေတွင် ပျော်ဝင်သော cream ပုံစံဖြစ်ပြီး မျက်နှာ နှိပ်နယ်ရာတွင် အသားအရေကို စေးကပ်ခြင်းမရှိဘဲ
#STAGE -7Colloidal masque base
ခြောက်သွေ့ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်သော ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်သော အသားအရေ (သို့) မျက်လုံးတ၀ိုက်နှင့်နှုတ်ခမ်းတ၀ိုက် အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ သဘာဝ သစ်ဥ ၊ သစ်ဖု များပြီး အသားရေကို ရေဓာတ်ကောင်းစွာ ဖြည့်စည်းပေးနိုင်ပါသည်။
#STAGE -8Clinical colloidal oatmeal
မျက်နှာပေါင်းတင်သော မက်(စ်) ဖြစ်ပါသည်။ အသားရေထိ ခိုက်လွယ်မှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး အသားအရေ ယားယံခြင်းအတွက် အထူးပျောက်ကင်းစေပါသည်။
#STAGE -9Antioxidant hydramist
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ မျက်နှာ ပေါ်ရှိ မလိုအပ်သော အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေ ကိုပြန်လည် တင်းရင်းချောမွေ့စေပါသည်။
#STAGE -10Active moist
အဆီဓာတ် ပါဝင်မှု မရှိဘဲ အသားရေ ပိတ်ဆို့ မှုမရှိဘဲ စိမ့်ဝင်မှု လွယ်ကူစေပြီး ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးပါသည်။ ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့သော ပရိုတိန်းဓာတ် နှင့်သခွားသီး တို့ကို ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို အေးမြချောမွေ့စေပါသည်။
## သတိပြုရန် ##
• ဆိုင်ဖွင့်ချိန် မနက် ၉နာရီ မှ ည ၁၁နာရီ အထိဖြစ်သည်။
• Booking ၁ နာရီကြို ပြီးလုပ်ရပါမည်။
• (မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာ လက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါက Discount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
• Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Conrirmation Code မဟုတ်ပါ။
### GROUPBUYY ဆိုတာ ###
• www.groupbuyy.com.mm ဆိုိုသည်မှာ မြန်မာပြည် ရှိ အမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကိုအလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီသတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
• www.groupbuyy.com.mm ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
### လိပ်စာ ###
No.34 C , 2A+ 16G , East Myin Pyaing Gwin Road
အမှတ် ၃၄ C , 2A+ 16G ,အရှေ့ မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်က Mizuri Hair & SPA
🌳#Groupbuyy ☝️ #Discount coupon #Mizuri Hair & Beauty Spa 💆 #Beauty #Fresh #Up to 25% Discount 👍
#Mizuri Hair & Beauty Spa မှ သင့်မျက်နှာလေးကြည်လင်လှပပြီး ဖန်သားလေးလို ဖြစ်နေ စေဖို့အတွက် နှင့် အပြစ်ပြောဖွယ်ရာမရှိသောအသားအရေ လေးများကို မိန်းကလေးတိုင်း ပိုင်ဆိုင် စေဖို့ အတွက် ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ…… သက်သာသောဈေးနှူန်းများ ရရှိနိုင်ရန် #Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်ပြီး လှမ်းလာခဲ့လိုက်ပါ……….
#Groupbuyy ph: ☎️ 📞09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ်ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန်အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 💻 📲www.groupbuyy.com.mm Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
###Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ် 📞 ☎️09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ##
💇Product Code – MZRS 001 (မိမိရယူမည့်Spa ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား
👩‍❤️‍💋‍👩Qty – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
📅DTG – 29.8.2016(သွားရောက်မည့်နေ့ရက်)
## 👉လတ်တလောရရှိနိုင်သော Spa လျော့ဈေး ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစား##
• 😍(1)Product Code – MZRS 001 (Facial Treatment Set)
• 😍(2)Product Code – MZRS 002 (Super Deluxe Spa Treatment)
• 😍(3)Product Code – MZRS 003 (Premium Spa Treatment )
💰Product Code – MZRS 001 (Facial Treatment Set)
•Normal Price – 15,000 Ks
•Groupbuyy Price – 10,000 Ks
•(Save Your Money) – 50,00 Ks
မျက်နှာလေးကို အရုပ်မလေး လို ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်......
💰Product Code – MZRS 002 (Super Deluxe Spa Treatment)
•Normal Price – 30,000 Ks
•Groupbuyy Price – 20,000 Ks
•(Save Your Money) – 10,000 Ks
ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားထဲရှိအဆိပ် အတောက်တွေ ပျောက်ကင်းပြီး လှပချင်သူများအတွက်.....
💰Product Code – MZRS 003 (Premium Spa Treatment )
•Normal Price – 40,000 Ks
•Groupbuyy Price – 30,000 Ks
ပေါ့ပါး လတ်ဆတ်ပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ လှပကျော့ရှင်း နေစေဖို့အတွက်.........
### ☝️Mizuri Spa ၏၀န်ဆောင်မှုများ ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်###
👉(1)Product Code – MZRS 001 (Facial Treatment Set)
Facial Treatment Set သည် အသုံးပြုသော Brand အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဈေးနှူန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။ ဈေးနှူန်းများမှာ ၁၅၀၀၀ ကျပ် မှ ၂၅၀၀၀ ကျပ် အထိရှိပြီး အသုံးပြုသော Brand များမှာ …….
• Healthy Shop
• Bsc …… စသည်တို့ဖြစ်ပြီး
• Treatment တွင်ပါဝင်သော အဆင့်များမှာ …..
• ဆာဝက်ခြံထုတ် (စက်ဖြင့်)
• လေဆာ Treatment (စက်ဖြင့်)
• ပေါင်းတင်ခြင်းတို့ဖြစ် ပါသည်။
👉(2)Product Code – MZRS 002 (Super Deluxe Spa Treatment)
Super Deluxe Spa Treatment တွင် ပါဝင်သော အဆင့်များမှာ
• Scrub အဆင့် (၄)ဆင့်
• Sauna (15 mins)
• Cucumber Mask (OPI Brand or The Body Shop Brand)
• Soothing Body Cream စသည့် အဆင့်များပါဝင်ပါသည်။
👉(3)Product Code – MZRS 003 (Premium Spa Treatment)
Premium Spa Treatment တွင် The Body Shop Set Brand ဖြစ်သော (Fuji Green Tea (or) Wild Argan Oil) ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ပါဝင်သော အဆင့်များမှာ…….
• Fuji Green Tea(or)Wild Argan Oil &3other Scrub
• Thai Herbal Mask
• Himalayan Body Clay
• Oil Massage (15 mins)
• Body Butter စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
• ဆိုင်ဖွင့်ချိန် မနက် ၁၀း၀၀မှ ည ၉း၀၀အထိဖြစ်သည်။
• တစ်နာရီကြိုတင် Booking လုပ်ရပါမည်။
• (မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါကDiscount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
• Groupbuyy Discount Coupon သည် Booking Confirmation Code မဟုတ်ပါ။
## 🌳Groupbuyy ဆိုသည်မှာ……
www.groupbuyy.com.mmဆိုတာ မြန်မာပြည်ရှိအမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
No.20, မအူပင်လမ်း ၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်…
Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township Relax Foot SPA
#Groupbuyy #Discount Coupon #Relax Foot Reflexology #Up to 20 % off
#Foot Reflexology 💆 👌 လေးလုပ်ပြီး သင့် ကိုယ်ပိုင် အချိန်လေး များကို အညောင်းအညာပြေ အပန်းပြေ ချင်သူများအတွက် #Relax Foot Spa မှ ကြိုဆိုလျှက်ရှိပြီး သက်သာသော အထူးလျော့ဈေးနှူန်းများ ရရှိနိုင်ရန် Groupbuyy သို့ တွေဝေစဉ်းစားစရာ မလိုပဲအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
#Groupbuyy ph: ☎️ 📞09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီး ကူပွန်ထုတ် ရန်အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 💻 📲www.groupbuyy.com.mm Website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
• ☝️1)Product Code – RFS 001 (မိမိအလိုရှိ Foot Reflexology ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစား
• 👨 👩 👧 👦QTY – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
• 📅DTG – 31.5.2016 (မိမိသွားရောက်မည့်ရက်စွဲ)
## ✨လတ်တလောရရှိနိုင်သော လျော့ဈေး Foot Reflexology အမျိုးအစား၎ မျိုး ##
(1)Product Code – RFS 001 (60 Mins for Head+Back&Shoulder+Arm+Medical Foot Bath)
(2)Product Code – RFS 002 (90 Mins for Head+Back&Shoulder+Leg+Foot+Medical Foot Bath)
(3)Product Code – RFS 003 (120 Mins for Head+Back & Shoulder + Arm+ Leg+ Foot + Medical Foot Bath)
(4)Product Code – RFS 004 (Sliver Member Card)
#Foot Reflexology ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းဆီ ၏ ဈေးနှူန်းအသေးစိတ်
(1) 👌Product Code – RFS 001 (60 Mins for Head+Back&Shoulder+Arm+Medical Foot Bath)
• Normal Price – 10,000 Ks
• Groupbuyy Price – 8,000 Ks
• (Save Your Money) – 2,000 Ks
မိနစ် ၆၀ ကြာခေါင်း၊လက်မောင်း၊ပခုံး ၊ကျော နှိပ်နယ်ခြင်း နှင့် ခြေထောက်ဆေးစိမ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါမည်။
(2 👌Product Code – RFS 002 (90 Mins for Head+Back&Shoulder+Leg+Foot+Medical Foot Bath)
• Normal Price – 14,000 Ks
• Groupbuyy Price – 11,200 Ks
• (Save Your Money) – 2,800 Ks
မိနစ် ၉၀ ကြာခေါင်း၊လက်မောင်း၊ပခုံး ၊ကျော နှိပ်နယ်ခြင်း နှင့် ခြေထောက်ဆေးစိမ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါမည်။
(3) 👌Product Code – RFS 003 (120 Mins for Head+Back & Shoulder + Arm+ Leg+ Foot + Medical Foot Bath)
• Normal Price – 17,000 Ks
• Groupbuyy Price – 13,600 Ks
• (Save Your Money) – 3,400 Ks
မိနစ် ၁၂၀ ကြာခေါင်း၊လက်မောင်း၊ပခုံး ၊ကျော နှိပ်နယ်ခြင်း နှင့်ဖြေဖုဝါး နှင့် ခြေထောက်ဆေးစိမ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါမည်။
(4) 👌Product Code – RFS 004 (Sliver Member Card)
• Normal Price – 100,000 Ks
• Groupbuyy Price – 90,000 Ks
• (Save Your Money) – 10,000 Ks
• Sliver Member Card မှာ ၁၀၀၀၀၀ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသောအခါ ၁၂၀၀၀၀ ကျပ် အထိသုံးဆွဲ ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ……
#About Relax Foot Reflexology Spa 🌾 🌿 🍀
• Relax Foot Spa တွင် နွေးထွေးပျူဌာသောကြိုဆိုမှု သန်ရှင်းသပ်ရပ်သော အပြင်အဆင် ငြိမ့်ညောင်းသော တေးသံသဲ့သဲ့ လေးတို့က သင့် စိတ်အပန်းပြေစေမည့် အပြင် ကျွှမ်းကျင်
• ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော ၀န်ထမ်းများ၏ ၀န်ဆောင်မှူများကလည်းသင့်စိတ်သဘော တွေ့စေမှာ မလွဲပါပဲ…
• Relax Foot Spa တွင် အသုံးပြုသော Oil များဟာ နွေးနွေးလေး နှင့် သဘာဝဆေးဘက်ဝင် အဆီများ ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကောင်းမွန်စေသည့်အပြင် မိမိခြေထောက် အသားအရေ အတွက်ရော ညောင်းညာမှူများကိုပါပျောက်ကင်းစေသော Cream အေးအေး လေးနှင့်ပါ ၀န် ဆောင် မှူပေးပါသည်။
####သတိပြုရန် 🚨 🚨 ####
တနလာင်္နေ့ မှ သောကြာနေ့ အထိ နေ့လည် ၁၁း၀၀ မှ ၇း၀၀ အထိ Groupbuyy Customer များကို ၂၀% လျော့ဈေးခံစားခွင့် ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁နာရီ ကြိုတင် Booking လုပ်ရမည်။
(မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကို သက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါကDiscount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
၀ယ်ယူစားသုံးသူများ သက်သာအောင် Discount Coupon များထုတ်ပေး သော Company ဖြစ်သည်။
## ✨Groupbuyy ဆိုသည်မှာ……
### 🚘 🚘 🚘လိပ်စာ ###
No.(91/105), D-1, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township.
အင်းယားလမ်း Empress Salon &SPA
##SPA #Discount Coupon #Empress SALOON##Groupbuyy ##ယုံကြည်မူရှိရှိအလှတရား#Up to 25% off
💅 💇 💆စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှူများကို ပြေပျောက်စေမည့်နေရာ မိမိအလှတရားများနှင့်အတူဘ၀ကိုယုံကြည်မူရှိရှိ လျောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် EMPRESS Saloon & Spa မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်..။
EMPRESS Saloon & Spaကိုသက်သာသောလျော့ဈေးနှူန်းထားများနှင့်သွားရောက်နိုင်ရန် Discount Coupon ရရှိနုိုင်ရန်အခုဘဲ Groupbuyy သို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
Groupbuyy ph ☎️ 📞09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon ထုတ်ယူပြီး သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပြီးကူပွန်ထုတ်ရန် အဆင်မပြေသူများအတွက်လည်း 📱 📲www.groupbuyy.com.mm website သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ပြီးသော်လည်းကောင်း Discount coupon ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
#Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ်09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMSနမူနာပုံစံ 👈 👈
💋Product Code – ESS 001 ( မိမိရယူလိုသော ၀န်ဆောင်မူ အမျိုးအစား )
👭Qty – 1 (သွားရောက်မည့် လူအရေအတွက်)
📆DTG – 1.5. 2016 ( သွားရောက်မည့် နေရက် )
(www.groupbuyy.com.mm သို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် ကာ discount coupon ထုတ်ယူထုတ်ယူသုများအတွတ် SMS ပို့ပြီးကူပွန်တောင်းရန်မလိုအပ်ပါ)
#လက်တလောရရှိနိုင်သော Spa ၀န်ဆောင်မူအမျိုးအစားမျာ 👍 👍
(1)Product Code – ESS 001 ( Prraffin Treatment )
(2)Product Code – ESS 002 (Spa Pedicure)
(3)Product Code – ESS 003 ( Footlogix Treatment )
##Spa ၀န်ဆောင်မူ၏ ဈေးနှူန်း အသေးစိတ် 💰 💸
(1) ☝️Product Code – ESS 001 ( wwPrraffin Treatment )
• Groupbuyy Price – 26,100 Ks
(Save Your Money – 3,900 Ks )
ခြေလက်၊အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲသူများအတွတ် အကောင်းဆုံး SPA ကုထုံး
(2) ☝️Product Code – ESS 002 (Spa Pedicure)
(Save Your Money – 8,750 Ks)
(3) 👆Product Code – ESS 003 (Footlogix Treatment)
• Normal Price – 37,000 Ks
• Groupbuyy Price – 31,820 Ks
(Save Your Money – 5,180 Ks)
ခြေဖနောင့်ကွဲ ၊အသမာ တတ် သူများအတွတ် အကောင်းဆုံး SPA Treatment
#Spa ၀န်ဆောင်မူ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် ထူးခြားချက် 🌸 🌷 🌺##
(1) 💜Product Code – ESS 001 (Prraffin Treatment)
ခြေလက်အသားအရေ ခြောက်သွေ့သူတွေ ၊ အဆစ်အမြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲသူတွေ လုပ်သင့်တဲ့ Treatment ပါ ။ အသားအရေ
စိုပြေစေရန် အတွက် ဖယောင်းပျော့ ကို အသုံးပြုပြီ အသားအရေကို ဖယောင်းကပ် ပါမည် ။ ပြီးနောက် အသားအရေ စိုပြေ၀င်းပစေရန် အတွက် lotion လိမ်းပေးပါမည် ။
(2) 💛Product Code – ESS 002 (Spa Pedicure)
အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ။ ခြေဖ၀ါးနှင့် ခြေသဲ များ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
Spa Pedicure မှာ အဓိက Service အဖြစ် Cleansing ၊ Nail Polish အနေနဲ့ Opi ၊ Scrub ၊ Oil Message ( 10 min ) နဲ့ Treatment Mask ၊ Nail Color ဆိုးပေးခြင်း တွေပါဝင်ပါသည် ။Sap Pedicure အနေနဲ့ဆို ခြေဖျားကနေ ဒူးအထိ ပါဝင်ပါသည်။
(3) 💚Product Code – ESS 003 (Footlogix Treatment)
Footlogix Treatment ကတော့ ခြေထောက် အသားမာများကိုအဓ်ိကပျောက်ကင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည် ။
အသားမာပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ Scrub ပြုလုပ်ခြင်း ၊ UV ray အဖြစ် ပိုးသတ်သန့်စင်ထားတဲ့ရေကိုအသုံးပြုပြီး ခြေထောက်ကို
Cleansing ပြုလုပ်ခြင်း ၊ အသားမာပျောက်ကင်းစေရန်အတွက် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း ပြီး Cleansing ထပ်လုပ်ပေးမည် ၊
အသားမာထပ်မဖြစ်စေရန် အသားမာပျောက်သည့်ှSpray ဖြန်းပြီး Scrub ထပ်လုပ်မည် ၊ lotion လိမ်းပေးခြင်များ ပြုလုပ်ပေးပါမည် ။
EMPRESS Saloon & Spa မှ Foreigner ရော Local Customer များအတွက်ပါ အကောင်းဆုံး Product များနှင့် International Standard
Brand များကို အသုံးပြု၍ Customerစိတ်ကျေနပ်မှူရရှိစေရန်
#သတိပြုရန် 🚨 🚨
#လိပ်စာ 🚘 🚲
အမှတ် ( ၁၃၅ ) မြေညီထပ် ၊ အင်းယားလမ်း ။
,ဝေဇယံတာ လမ်း ၊တောင်ဥကလာပ မြို့ နယ် Health House SPA
#Groupbuyy #Discount Coupon #Health House Spa #Massage #တာမွေ Branch #South Okkalar Pa Branch
💆#တနေ့တာလုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုတွေကိုရယူလိုက်ကြစို့လား?
♣️ 💁ရှေးယခင် အီဂျစ်ဘုရင်မ လက်စွဲ အလှကုထုံးတွေ ရ ရှိနုိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောနေရာ
Groupbuyy ph: ☎️ 📞09450067677 သို့ဆက်သွယ် ပြီးSMS Coupon
☝️Product Code – HHS 001 (မိမိရယူမည့်Spa ၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား)
👫Qty – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
📅DTG – 9.9.2016(သွားရောက်မည့်နေ့ရက်)
## 😍လက်တလောရရှိနိုင်သော Spa လျော့ဈေး ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစား##
(1) 👌Product Code – HHS 001 ( Thai Massage 90 minutes)
(2) 👌Product Code – HHS 002 (Thai Herbal Ball Compress massage 90 minutes)
(3) 👌Product Code – HHS 003 (Health House Singnature Massage 90 minutes )
(4) 👌Product Code – HHS 004 ( Turmeric Body Scrub & Herbal Wrap 60 minutes )
(5) 👌Product Code – HHS 005 ( Cleo Gold Body Scrub & Gold Mud Tort Wrap 60 minutes)
💆Product Code – HHS 001 ( Thai Massage 90 minutes)
• Normal Price – 24,000 Ks
• Groupbuyy Price – 20,000 Ks
• (Save Your Money – 4,000)
💆Product Code – HHS 002 (Thai Herbal Ball Compress massage 90 minutes)
• Groupbuyy Price – 31,000 Ks
စိတ်ဖီ စီးမှုနှင့်ပင်းပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးပေါင်းစုံ
💆Product Code – HHS 003 (Health House Signature Massage 90 minutes )
• Normal Price – 45,000 Ks
• Groupbuyy Price – 38,000 Ks
• (Save Your Money – 7,000Ks)
လူအများဆုံး ကြိုက်တဲ့ မိနစ် ၉၀ စာ Signature
💆Product Code – HHS 004 ( Turmeric Body Scrub & Herbal Wrap 60 minutes )
အဆီခဲများကို လျော့နည်းစေကာအသားရည်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းလိုလျင်
💆Product Code – HHS 005 ( Cleo Gold Body Scrub & Gold Mud Tort Wrap 60 minutes)
• Normal Price – 80,000 Ks
• Groupbuyy Price – 56,000 Ks
• (Save Your Money – 24,000Ks)
ရှေးယခင် အီဂျစ်ဘုရင်မကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့သော ရွှေ နှင့် ပုလဲ သုံးထားနဲ့အသားရည်လှပစေသည့် ၀န်ဆောင်မှု
# 📋Spa ၏ထူးခြားချက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းဆီဧ။်အသေးစိတ်##
🚩Product Code – HHS 001 ( Thai Massage 90 minutes)
သည်ယောဂကျင့်စဉ်ကဲ့သို့ စိတ် စွမ်းအားကိုတိုးပွားစေခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်ေ
စသည့်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်နုပျိုခြင်းကိုအားဖြည့်ပေးပါသည်။ စိတ်ဖီစီးမှုကိုလျော့ကျစေသည့်အပြင်
🚩Product Code – HHS 002 (Thai Herbal Ball Compress massage 90 minutes)
ပ်ကိုအသုံးပြုပြီး နှိပ်ပေးသောထိုင်းရိုးရာနှိပ်နည်း ဖြစ်ပါသည်။စိတ်ခံစားမှုကြော
င့်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ဖီ စီးမှုနှင့်ပင်းပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိသွေးဖြူဆဲ
လ်များကိုတိုးပွားလာစေသည်အတွက် သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းကာ ပြီးပြ
🚩Product Code – HHS 003 (Health House Singnature Massage 90 minutes )
သည် Health House’s ၏ ပြိုင်ဘက်ကင်း ရနံ့ကုထုံး နည်းပညာဖြစ် ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
၊ကြောင့်ကြစိတ်နှင့်စိုးရိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။တခါလုပ်ရုံနဲ့
🚩Product Code – HHS 004 (Turmeric Body Scrub & Herbal Wrap 60 minutes)
သည်အရည်ပြားပေါ်ရှိသေဆုံးနေတဲ့ Cell များကိုဖယ်ရှားပေးသည့်အပြင်Cell များကိုအသစ်တဖန်ရှင်သန်လာအောင်လဲပြုလုပ်ပေးပါသည်။သွေးဖြူဆဲလ်များကို
တိုးပွားစေသည့်အတွက်အသားအရည်စိုပြေ၀င်းပစေရန်အတွက်ကူညီပေးပါသည်။နနွင်းမှုန့် ကိုအသုံးပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကိုScrub ပြုလုပ်ပေးပါသည်.။
lymphatic အရည်နည်းပညာဖြစ်ဇီဝကမ္မဗေဒ ကိုတိုးတက်စေပြီး အဆိပ်တောက်များကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။အသားရည်ကိုခိုင်မာကျစ်လစ်စေပြီး
အမျိုးသမီးများ၏တင်ပါးဆုံနှင့် ပေါင်နားရှိအဆီခဲများကို လျော့နည်းစေကာအသားရည်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါသည်.။အသားရည်ရှိရေဓာတ်ကိုထိန်းထားပြီး
🚩Product Code – HHS 005 ( Cleo Gold Body Scrub & Gold Mud Tort Wrap 60 minutes)
သည်ရှေးယခင် အီဂျစ်ဘုရင်မကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့သော အသားရည်လှပစေသည့်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Cleo
Goldမှာတော့အဓိကအားဖြင့် ရွှေကိုအသုံးပြုထားသည့်အတွက် အမျိုးသမီး ကော အမျိုးသားပါပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အရည်ပြားပေါ်ရှိသေဆုံးနေတဲ့ Cell များကိုဖယ်ရှားပေးသည့်အပြင်Cell များကိုအသစ်တဖန်ရှင်သန်လာအောင်လဲပြုလုပ်ပေးပါသည်။သဘာဝမှအကော
င်ဆုံးရွှေပါဝင်သည့်ရွှံ့ ကိုအသုံးပြုပြီး တကိုယ်လုံးကို သုပ်လိမ်းပြီးအသားအရည်စိုပြေ၀င်းပစေရန်အတွက်ကူညီပေးပါသည်။HealthHouse Spa၏အကောင်းဆုံးSpa treatment ဖြစ်ပြီး အသားရည်ဝင်းပ၊အမာရွတ်ပျောက်ကင်း၊အသားရည်တင်ရင်းစေသည့်အပြင်ေ
ရွှအစစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အဖြူရောင်ပုလဲအစစ်ကိုအသုံးပြုထား၍ အသားရည်ထိမ်းသိမ်းလိုသူများအတွက်အသုံးဆုံးဖြစ်သည်။
• (မှတ်ချက် - Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော Discount Coupon Code ကိုသက်ဆိုင်ရာလက်မှတ် ကောင်တာသို့ပြသပါကDiscount ဈေးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး Discount Coupon Codeကို မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
www.groupbuyy.com.mm 💻ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရှိအမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
www.groupbuyy.com.mm 💻ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
ဆိုင် ၁ - အမှတ် 97B ,ဝေဇယံတာ လမ်း ၊တောင်ဥကလာပ မြို့ နယ်
ဆိုင် ၂ -အမှတ် 21B, နက်မောက်ရိပ်လမ်း ၊ တာမွေ မြို့ နယ် ၊ရန်ကုန်
လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ် Venus Beauty SPA
🍀#Groupbuyy 💳#Discount Coupon 💆 #Venus Beauty Spa #Massage ကုထုံးများ ##
#Venus Beauty Spa မှ လူကြီးမင်းတို့၏ အကိုက်အခဲညောင်းညာမှူများကို ပြေပျောက်သွားစေရန်ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးအတွက် Massage ကုထုံးများကို စိတ်တိုင်းကျဝန်ဆောင်မှူပေးနေပြီး သက်သာသော ဈေးနှူန်းများရရှိနိုင်ရန် Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ……….
💆Product Code – VNM 001 (မိမိရယူမည့် Massage၀န်ဆောင်မှုအမျိုးအစား)
👱Qty – 1 (သွားရောက်မည့်လူဦးရေ)
📅 DTG – 5.10.2016(သွားရောက်မည့်နေ့ရက်)
👉 👉လတ်တလောရရှိနိုင်သော Spa လျော့ဈေး ၀န်ဆောင်မှူ အမျိုးအစား##
• (1) ☝️Product Code – VNM 001 (Chinese Dry Masage for 60 mins)
• (2) ☝Product Code – VNM 002 (Chinese Medicine Foot Bath for 60 mins)
• (3) ☝Product Code – VNM 003 (Oil Massag for 60 mins)
• (4) ☝Product Code – VNM 004 (Body Steaming for2Hours)
# 💰 💰Spaလျော့ဈေးများ၏ဈေးနူန်းအသေးစိတ်အချက်အလက် 💰 💰##
💸Product Code – VNM 001 (Chinese Dry Masage for 60 mins)
• Normal Price – 12,000 Ks
• Groupbuyy Price – 10,200 Ks
• (save your Money) – 1,800 Ks
💸Product Code – VNM 002 (Chinese Medicine Foot Bath for 60 mins)
• Groupbuyy Price – 11,900 Ks
• (Save Your Money) – 2,100 Ks
💸Product Code – VNM 003 (Oil Massag for 60 mins)
• Groupbuyy Price – 29,750 Ks
• (Save Your Money) – 5,250 Ks
💸Product Code – VNM 004 (Body Steaming for2Hours)
• Normal Price – 50,000 Ks
• Groupbuyy Price – 42,500 Ks
• (Save Your Money) – 7,500 Ks
### 🎉Venus Beauty Spa ၏ထူးခြားချက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ✨###
💝တိတ်ဆိတ်အေးချမ်း သန့်ရှင်းသပ်ရပ် ပြီး စည်းကမ်းတကျ ယဉ်ကျေးပျူဌာသော ၀န်းထမ်းများ၏ ၀န်ဆောင်မှူများကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှူအပြင်
💝အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သဘာဝ သစ်သီးများမှ အဆီအနှစ်များ တရုတ်ရိုးရာ ဆေးများ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသောAroma Oilစသည့်ဆေးများအသုံးပြုသောကြောင့်
💝လူကြီးမင်း သွားလာလှုပ်ရှားမှူများကြောင့် ညောင်းညာ ကိုက်ခဲမှူများ တနေ့တာ အလုပ်များကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းမှူများ ကို
💝Venus Beauty Spa မှာ Massage ပြုလုပ်ရင်း ညောင်းညာကိုက်ခဲ မှူတွေလည်း ပျောက် စိတ်ပင်ပန်းမှူတွေမှလည်း အပန်းဖြေလိုက်ကြရအောင် အမြန်ဆုံးလှမ်းခဲ့လိုက်ပါ…..…..
💝အဲဒါဆိုရင် ၁၅% ဈေးနှူန်း Discount ရဖို့ Groupbuyy သို့ဆက်သွယ်ပြီး ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…..။
(1) 🏮Product Code – VNM 001 (Chinese Dry Masage for 60 mins)
• တရုတ်ရိုးရာ နည်းဖြင့် အကြောဖြေနှိပ်နယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ၁နာရီကြာဝန်ဆောင်မှူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်….
(2) 🏮Product Code – VNM 002 (Chinese Medicine Foot Bath for 60 mins)
•တရုတ်ရိုးရာ ဆေးနည်းဖြင့် ခြေထောက်ကိုဆေးရည်စိမ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ခြေထောက်အသားမာရှိသူများ
• အညိုအမဲကွက်ကို ပျောက်ကင်းပြီး ဖြူဝင်းသန့်စင်လာစေသောကြောင့် အမြဲတမ်းလုပ်သင့်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှူလေးဖြစ်ပါတယ် ။
• ပြီးတော့ ခြေထောက် အပြင် တကိုယ်လုံးကိုလည်း Massage လုပ်ပေးအုံးမှာဖြစ်တော့ အဆင်အပြေဆုံးပေါ့……..
(3) 🏮Product Code – VNM 003 (Oil Massag for 60 mins)
• Aroma Oil နှင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ညင်သာညက်ညော စွာ နှိပ်နယ် ပြီး ကြွက်သားများကို ပြေလျှော့စေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သူက Oil massage အမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ် Venus Beauty Spa မှာတော့ သံလွင်ဆီ စစ်စစ်ကနေ ထုပ်ထားတဲ့ Aroma Massage Oil ကိုအသုံးပြုပါတယ် ။
(4) 🏮Product Code – VNM 004 (Body Steaming for2Hours)
Body Steaming မှာတော့ပထမဆုံး ဘော်ဒီ ဂျေးချွတ် ခြင်း Body Scrub ပြုလုပ် ခြင်းက အခုနောက် ပိုင်း အမျိုးသမီးတော်တော် များများ စိတ်ဝင်စားမူ့ရှိလာတဲ့ body treatment တစ်ခုဖြစ် ပါတယ် ။
အဓိက အနေနဲ့ body ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေ တွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ဆဲလ်အသစ်တွေ နဲ့ အတူ အရေပြားကို နုးညံ့ စေပြီး ချောမွတ်စေပါတယ်။
ဒုတိယ အနေနှင့် Sauna ထိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ ချွေးဆိုးချွေးညစ်များကို ထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အသားအရေကြည်လင်လာစေပါသည်။
တတိယ အဆင့်အနေနှင့် Oil Massage ပြုလုပ်ပေးခြင်း……Aroma Oil နှင့် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ညင်သာညက်ညော စွာ နှိပ်နယ် ပြီး ကြွက်သားများကို ပြေလျှော့စေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ တကိုယ်လုံးက်ု Mask အုပ်ပေးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်………
## 🚫သတိပြုရန် 🚫##
• ဆိုင်ဖွင့်ချိန် မနက် ၉း၀၀ မှ ည ၁၀း၀၀အထိဖြစ်သည်။
## ☝️Groupbuyy ဆိုသည်မှာ ☝……
•www.groupbuyy.com.mmဆိုတာ မြန်မာပြည်ရှိအမြို့မြို့အနယ်နယ်တိုင်းမှာရှိသော လျှော့ဈေးသတင်းများကို အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်အချိန်နှင့် တပြေးညီ သတင်းပေးလျှက်ရှိနေပါပြီ…။
•ကျွန်ပ်တို့နေ့စဉ်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပေးလျှက်ရှိသောလျှော့ဈေးသတင်းများမှာ Restaurants, Spas,Things to do , Nightlife , Massages, Salons , Hotels , Education စသည့် Sector များဖြစ်ပြီး ယခုပင်သင့်အသုံးစရိတ်ကို ချွေတာနိုင်ရန် လျော့ဈေးကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ…။
• www.groupbuyy.com.mm ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှူသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်…။
## 🚘လိပ်စာ 🚘##
လေးထောင့်ကန်လမ်းမ ၊ သုဝဏ္ဏကွင်း ၊ သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန် ၊
Dagon Center2မှာရှိတဲ့ Hera SPA
အလှအပတရားကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးးထားသော သူများအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှူရရှိစေရန် HERA Spa တွင်Discount Price များဖြင့် ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့…………..
Groupbuyy ; ဖုန်း 09 450067677 သို့ discount code တောင်းယူလိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်-Groupbuyy မှပို့ ပေးလိုက်သော SMS (သို့)www.groupbuyy.com.mm မှ
ထုတ်ပေးလိုက်သော Discount Coupon (သို့ မဟုတ်)် discount coupon code ပါဝင်သော SMS မပြနိုင်ခဲ့ပါက ပုံမှန်ဈေးဖြင့်သာ ရှင်းပေးရပါမည်။)
** Discount ကာလမှာ Oct 21 ထိသာဖြစ်ပါသည်။ **
*** Discount Coupon လေးကို အသုံးပြုရမည့် ဆိုင်ခွဲနေရာများကတော့***
Shop (1) –ဒဂုံ စင်တာ ၂ ၊ ၄ လွာ
Shop (2) – ဗဟန်း ၊အင်းယားမြိုင်လမ်း ဆိုင်ခွဲ
Shop (3) - တော်ဝင်စင်တာ ၃ လွာ
#Discount Code ရရန် #Groupbuyy ဖုန်းနံပါတ်
09-450067677 သို့ ပို့ ရမည့် SMS နမူနာပုံစံ
Product Code – HERA 001 (မိမိဝယ်လိုသောဝန်ဆောင်မှု)
Qty -2(သွားရောက်မည့်သူအရေအတွက်)
DTG – 7.8.15 /Fri (သွားရောက်မည့်နေ့ စွဲ နှင့်ရက်)
Shop –3(မိမိသွားရောက်ချင်သည့်ဆိုင်ခွဲနံပါတ်)
###လက်တလောရရှိနိုင်သော Discount ကူပွန်ထုတ်ယူနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှု များ###
(1) Product Code – HER 001 (Oil -Foot Massage Only) – 1Hour
(2) Product Code – HER 002 (Thai - Dry Body Massage) – 1 Half Hour
(3) Product Code – HER 003 (Aroma Swedish -Oil Body Massage) – 1 Half Hour
(4) Product Code – HER 004 (Facial Whiting Special Treatment) 1Half Hour to 2Hour
(1)Product Code – HERA 001 (Oil -Foot Massage Only) – 1Hour
Normal Price – 17,000 Ks
Groupbuyy Discount Price – 10,200 Ks
(Your Save Money – 6800 Ks)
(2)Product Code – HERA 002 (Thai – Dry Massage ) – 1 Half Hour
Normal Price – 23,500
Groupbuyy Discount Price – 20,000 Ks
(Your Save Money – 3,500 Ks)
(3)Product Code – HERA 003 (Aroma Swedish -Oil Massage) – 1 Half Hour
Normal Price – 27000 Ks
Groupbuyy Discount Price – 23000 Ks
(Your Save Money – 4,000 Ks)
(4)Product Code – HERA 004 (Facial Whiting Special Treatment ) 1Half Hour (or) 2Hour
Normal Price – 166500 Ks
Groupbuyy Discount Price – 141500 Ks
(Your Save Money – 25,000 Ks)
***** HERA SPA ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်း ထူးခြားချက်များ*****
(Hera Spa တွင် (SOTHYS) French Brand လှပဆိုင်ရာဆေးများသာအသုံးပြုသည်။)
(1) Product Code – HER 001 (Oil -Foot Massage Only)
ညောင်းညာကိုက်ခဲပြီး အပန်းဖြေ နားနေချင်သူများ..
Oil Massage ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်နွေးနေသောOil နှင့် Foot Massage လုပ်လို့ရသလိုပုံမှန် Oil နှင့်လည်းရနိူင်သောကြောင့် ခံစားမှူ (၂)မျိုးကြိုက်ရာ ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁ နာရီ ကြာမြင့်အောင် Massage လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
(2) Product Code – HER 002 (Thai - Dry Massage) – 1 Half Hour
Thai ရိုးရာ နှိပ်နည်း ဖြစ်ပြီး အနှိပ်ဆီအသုံးမပြုဘဲအခြောက်အတိုင်းနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်.
Body Massage ဖြစ်တာကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေမှာအမှန်ပါဘဲ။
၁နာရီခွဲကြာမြင့်အောင် Massage လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
(3) Product Code – HER 003 (Aroma Swedish -Oil Massage) – 1 Half Hour
***Aroma Swedish Massage ဟာ အနောက်တိုင်း ခန္ဓာဗေဒ နဲ့ စိတ်ပညာ ရပ်တို့ ကိုပေါင်းစပ် အခြေခံထားတဲ့ အနောက်တိုင်းအနှိပ်ပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ညင်သာညက်ညော စွာ နှိပ်နယ် ပြီး ကြွက်သားများကို ပြေလျှော့စေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သူက Oil massage အမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေမယ်၊ခန္ဒာကိုယ် က အောက်စီဂျင်ကို အပြည့်အဝ စုပ်ယူနိုင်ပြီး သွေး လည်ပါတ်မှု့ကိုကောင်းစေမယ် ပြီးတော့ ခန္ဒာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျှော့
ပြီးတော့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေ မယ် ဒါတွေကတော့ Swedish Massage ရဲ့ ထူ့ခြားချက်တွေပါပဲ။
(4)Product Code – HERA 004 (Facial Whiting Special Treatment )
1Half Hour to 2Hour
Facial Whiting Special Treatment ကို ၁နာရီ (သို့) ၂နာရီ အထိဝန်ဆောင်မှူပေးမှာဖြစ်
-ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ Face Mask ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
-ဒုတိယ အဆင့်မှာ Serum ကိုအသုံးပြုပြီး Dead cell များကို Cleansing လုပ်ပေးပြီး
-တတိယအဆင့်တွင် Facial Massage ပြုလုပ်ပါသည်။
-နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရေနွေးငွေ့ ဖြင့် မျက်နှာပေါင်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
Peeling Effect ပါဝင်သောကြောင့် မျက်နှာတွင်ရှိသော ဆဲလ် အသေများ…မှဲ့ခြောက်များ
အလှတရားကိုတန်ဖိုးထားမြတ်နိုးသူတိုင်း တစ်လ တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
မသွားခင် ၂နာရီ အရင် Booking ကြိုလုပ်ရပါမည်။
Shop (1).(2).(3) …၃ဆိုင် လုံးတွင် Coupon Code အသုံးပြုရန်အချိန်မှာ 10:am to 9:00 pm ဖြစ်ပြီးပိတ်ရက်မရှိပါ။
အမျိုးသမီးများသာမက ..အမျိုးသား များပါသွားရောက်လို့ရပါသည်။
Shop (1) – L4(11)Dagon Centre (2),Sanchaung Tsp., Yangon.
Shop (2) – No-2A, Innya Myaing Road, Bahan Tsp., Yangon.
Shop (3) - No-4008(C), Level-3, Tawwin Centre, Pyay Road, Yangon.